dopamine ၏အန္တရာယ်ကိုယူဆောင်လာခြင်း၏အခန်းကဏ္ at - ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်လောင်းကစားကိုအထူးဂရုပြုလေ့လာခြင်း (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ပေါက်
အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို: တိကျတဲ့ပါကင်ဆန်ရောဂါမှာကြည့်နှင့်လောင်းကစားဝိုင်း (2014)
တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience ။ 2014 မေလ 30; 8: 196 ။ Doi: 10.3389 / fnbeh.2014.00196 ။ eCollection 2014 ။
crystal အေ Clark က နှင့် Alain Dagher*
တစ်ခုကသြဇာမော်ဒယ် dopamine ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့ဆုလာဘ်အကြားခြားနားချက်အချက်ပြလိုက်ခြင်းကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်, dopamine ဆုလာဘ်တိုးမြှင့်ဖို့အပြုအမူတွေကိုပုံဖော်နှင့်ပြစ်ဒဏ်များကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ့်သင်ယူမှု signal ကိုအဖွစျဆောငျရှကျနိုငျသညျ။ Dopamine လည်းအပြုအမူရှာကြံဆုလာဘ် invigorate မှထင်နေသည်။ dopamine အချက်ပြ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်အဓိကမူမမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ Dopamine agonists, ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာအတွက်အရင်းခံတွန်းအားကိုထိန်းချုပ်မမှန်များ၏ဖြစ်ပျက်မှုအတွက်အသုံးအများဆုံးဖြစ်ခြင်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် compulsive ဝယ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ မကြာသေးမီကပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားထိန်းချုပ်မမှန်စုံစမ်းစစ်ဆေးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုအတော်များများထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ ဤတွင်ကြှနျုပျတို့သညျဤစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်အလားအလာရှိသောအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာရောက်ရှိမည်အကဲဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမူဘောင်အတွင်းကနေရာကြိုးစား။ ငါတို့သည်လည်းထိုအတန်ဖိုးနှင့်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်အပေါ် dopamine agonist ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်တစ်ဦးမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ပေမယ့်နေဆဲမပြည့်စုံမော်ဒယ်ပေး။ ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုံးရှုံးမှုကွန်ပျူတာရှုထောင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ထင်၏အဓိကဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှစျယောကျစလုံး dopamine projection က်ဘ်ဆိုက်များအတွက် ventral striatum (VStr) နှင့် insula ဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအဆောက်အဦများတသမတ်တည်းပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနေကြသည်။
keywords: ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်, Impulse, ဆုလာဘ်, အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်, insula, ventral striatum
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသည့်လောင်းကစားသမားပိုက်ဆံချွေဖို့ပိုမိုကြီးမားပိုဖြစ်နိုင်ခြေအခွင့်အလမ်းကျော်ကပိုက်ဆံရရှိရန်ချက်ချင်းဒါပေမယ့်အန္တရာယ်များအခွင့်အလမ်းရွေးချယ်မထွက်ရ, ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ဦးရောဂါအဖြစ် conceptualized (Ochoa et al နိုင်ပါသည်။ , 2013) ။ အမှန်စင်စစ်လောင်းကစားဝိုင်းပုံမှန်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖုနှင့်အနာဂတ်အကျိုးဆက်များအားဖြင့်အတော်လေး uninfluenced ဖြစ်သည့်အတွက်, Impulse တစ်ဦးရောဂါအဖြစ် conceptualized ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေတိုးလာ Impulse ကိုသရုပ်ပြနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအစီအမံ (Verdejo-Garcia က et al အပေါ်ဝနှောင့်နှေးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ , 2008) ။ အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များမှအာရုံမခံစားနိုင်သောနှင့်အတူအပြုအမူရှာကြံတိုးမြှင့်ဆုလာဘ်၏နားချင်းဆက်မှီ Vitaro et ခြုံငုံငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှု (အယ်လ်၏မျက်နှာ၌လောင်းကစားဝိုင်းများ၏ဇွဲကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ , 1999; Petri, 2001b; Cavedini et al ။ , 2002) ။ ဤသည်အယူအဆရေးရာမူဘောင်အလားအလာအန္တရာယ်များကိုအသေးအဖွဲအနေဖြင့်ချက်ချင်းအကျိုးအမြတ်ရှာကြံနေရာအနှံ့ဘယ်မှာမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဆင်တူသည်။ စွဲလမ်း၏ထူးခြားချက်ထပ်ခါတလဲလဲအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ (American Psychiatric Association, သော်လည်းစွဲထိန်းသိမ်းရန်ကြောင်းအပြုအမူတွေအတွက်မတရားသောသို့မဟုတ် compulsive, ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဆုံးရှုံးမှုများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများပါဝင်သည် 2000) ။ ကအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ၏မျက်နှာကိုထိုသို့သောမလှူခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတဦးတည်းရဲ့အမူအကျင့်အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အပြုအမူများဆက်လက်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနှင့်အတူများစွာသောဘုံ features တွေ, မျှဝေသောကွောငျ့အလားတူပင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း Grant က et (ကအမူအကျင့်စွဲအဖြစ်ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည် အယ်လ်။ , 2006; လူကောင်း, 2008) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေမူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်ဆင်တူမထိန်းချုပ်မတရားသော, သည်းခံစိတ်, လေ့နှင့်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ, (Wray နှင့် Dickerson, ပြ 1981; Castellani နှင့် Rugle, 1995; Duvarci နှင့် Varan, 2000; Potenza et al ။ , 2003) ။ ထိုမှတပါး, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှစ်ဦးစလုံး, တူညီတဲ့တိကျတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ, အမည်ရအာရုံရှာခြင်းနှင့် Impulse (Zuckerman နှင့် Neeb နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် 1979; Castellani နှင့် Rugle, 1995), အရာအညွှန်းကိန်းအလားအလာဆုလာဘ်မှ arousal ကြီးထွားခြင်းနှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှုနှင့် inhibitory function ကိုလျှော့ချ။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို (မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်) နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (Petri ကြားမြင့် comorbidity 2001a; Petri et al ။ , 2005), နှင့်ထပ် etiologies (Slutske et al ရှိခြင်းနှစ်ခုမမှန်ဖို့ဘုံမျိုးရိုးဗီဇအချက်များ, အမှတ်အဘို့သက်သေသာဓက။ , 2000; လူကောင်း, 2008).
တဦးတည်းအသုံးဝင်သောမော်ဒယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့မွေးရာပါအစိတ်အပိုင်းများကိုလေ့လာသင်ယူဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်ရှုမြင်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချအလားအလာကုန်ကျစရိတ် (ဥပမာ, အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ) ဆန့်ကျင်ဆုလာဘ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်တန်ဖိုးများ၏အလေးချိန်ဆင်းကျိုးပဲ့နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောရလဒ်ကိုမရေရာဒွိဟနှင့်ကှဲလှဲကဲ့သို့သောအခြားအချက်များ (တစ်ခါတစ်ရံအန္တရာယ်အဖြစ်ရည်ညွှန်း) ကိုလည်း (Huettel et al တစ်ဦးချင်းစီရွေးချယ်မှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ , 2006လောင်းကစားစဉ်), ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာသာဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ဆုံးအဖွတျအဖြစ်အလားအလာအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်းမဆိုရှေးခယျြမှုမှပူးတွဲအလားအလာဆုံးရှုံးမှုဆိုလိုဖို့ "အန္တရာယ်" ယူပါလိမ့်မယ်။ စွန့်စားမှု, ဒါကြောင့်သတ်မှတ်ထားသောအဖြစ်အလားအလာဆုံးရှုံးမှု၏ပြင်းအားနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူတိုးပွားစေပါသည်။ တကယ်တော့အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသည့်အလားအလာအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကွန်ပျူတာအကြားရှိရင်းစွဲချိန်ခွင်တစ်ခုညွှန်ပြချက်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဤအ computing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ထင်၏အဓိကဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏နှစ်ယောက် ventral striatum (VStr) နှင့် insula, နှစ်ဦးစလုံး dopamine projection က်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးဟာ VStr အပြုသဘောအမြတ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးခြင်းမျှော်လင့်အနုတ်လက္ခဏာ (Rutledge et al ကုဒ်သွင်း, ခန့်မှန်းအမှား (RPE) ဆုချဖို့အထူးသဖြင့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူတန်ဖိုး computing နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ။ , 2010; Bartra et al ။ , 2013), နှင့်အချို့သောလေ့လာမှုတွေ (Knutson နှင့် Greer အတွက်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အရှုံးမျှော်လင့်ဖို့အများစုတုံ့ပြန်သည့် insula, 2008) သို့မဟုတ်အခြားသူများအားအတွက်အပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များ (ကမ့်ဘဲလ်-Meiklejohn et al နှစ်ဦးစလုံးမှ။ , 2008; Rutledge et al ။ , 2010) ။ Bartra et al ။ ရဲ့ Meta-analysis သည် (ပုံ (Figure1) 1) တန်ဖိုးကိုဆန့်ကျင်ကြောင့်အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုနှစ်ဦးစလုံးမှအပြုသဘောတုံ့ပြန်အဖြစ် insula, arousal သို့မဟုတ် salience encodes ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤသည် Meta-analysis သည်လည်း (ပုံထဲမှာပြား A နှင့် B နှိုင်းယှဉ်အကျိုးအမြတ်ထက်အန္တရာယ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများအကဲဖြတ်အတွက် insula များအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အခန်းကဏ္ဍများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက် Figure1) .1) ။ ဤအအမြတ်နှင့်အရှုံးမျှော်လင့်စနစ်များအကြားချိန်ခွင်အပြောင်းအလဲတချို့ထိုကဲ့သို့သောစွဲ, လောင်းကစားနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်အဖြစ်မမှန်အတွက်ပေါ်ပေါက်သောမသင့်လျော်ရွေးချယ်မှုအပြုအမူတွေကိုအခြေခံလိမ့်မည်။
Bartra et al ထံမှယူတန်ဖိုး fMRI လေ့လာမှုများ၏ meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (။ , 2013)။ 206 ကနေ activation ၏အထွတ်အထိပ်ကိုသြဒီနိတ်ဖြည်စာရေးဆရာများတန်ဖိုးကို computing စုံစမ်းစစ်ဆေးကြောင်း fMRI လေ့လာမှုများထုတ်ဝေခဲ့သည်။ (က) အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုများသိသိသာသာ Cluster ။ (ခ) အရေးကြီးသော ...
မကြာမီကသုတေသနဦးနှောက် function ကိုအတွက်ကွဲပြားမှု, ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်ဇီဝဓါတုဗေဒ dopamine ဘုံ etiological အချက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူလောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာများကိုဖွံ့ဖြိုးသောသူတို့အားအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ imaging လေ့လာမှုများ (ကျန်းကျန်းမာမာဘာသာရပ်များအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းတာဝန်များကိုစဉ်အတွင်း Thut et al mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုးသရုပ်ပြခဲ့ကြ။ , 1997; Zald et al ။ , 2004; Hakyemez et al ။ , 2008) ။ သို့သော်သူကခန့်မှန်းရခက်ဆုလာဘ်တာဝန်များကိုပု striatum (Zald et al ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင် dopamine ဂီယာတစ်ခုဖိနှိပ်မှုများနှင့်တိုးမြှင့်စေနိုင်စွမ်းရှိသည်သတိပြုသင့်ပါတယ်။ , 2004; Hakyemez et al ။ , 2008) ။ dopamine ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းနှင့် 3,4-dihydroxyphenyl-acetic acid နှင့် homovanilic အက်ဆစ် (Bergh et al ၏ cerebrospinal fluid ကိုအဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးမှတဆင့်တွေ့ရှိခဲ့အဖြစ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအပေါ်အစောပိုင်းကသုတေသနပြောင်းလဲ dopaminergic နှင့် noradrenergic စနစ်များကိုအကြံပြုခဲ့သည်။ , 1997) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေကိုလည်း norepinephrine ၏အဓိက metabolite အဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်လျှင် norepinephrine ၏သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ဆီးရလဒ် (ရွိုင်း et al, 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol မြင့်မား cerebrospinal fluid ကိုအဆင့်ဆင့်ရှိသည်ဖို့အစီရင်ခံခဲ့ကြ။ , 1988), အ noradrenergic စနစ်၏တစ်ဦး functional နှောင့်အယှက်များပြ။ ထို့အပြင်မျိုးရိုးဗီဇ polymorphic ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များအဖြစ် dopaminergic neurotransmission လုပ်ရပ်ထိခိုက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ (Lobo နှင့်ကနေဒီ, ရှိ 2006).
အမူအကျင့်အားဖြည့်အတွက် dopamine implicating တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားများ, သဘာဝကထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်လိင်အဖြစ်ဆုလာဘ်, အဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (Di Chiara နှင့် Imperato ၏မူးယစ်ဆေးရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်ဝိုင်းနိုင်မယ့် neurobiological အလွှာကိုထောက်ပံ့ပေး, 1988; ပညာရှိ Rompre, 1989; ပညာရှိ 1996, 2013) ။ Schultz နှင့်အခြားသူများ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက် (Schultz et al ။ , 1998; Schultz, 2002) ဆုလာဘ်တုံ့ပြန် dopamine အာရုံခံများအတွက်အခန်းကဏ္ဍအတည်ပြုခဲ့သည်; သို့သော် dopamine အချက်ပြ၏လက်ရှိမော်ဒယ်ဂူဒါယန်းနှင့် Schultz (Schultz et al အားဖြင့်က Seminal စက္ကူမှခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ , 1997), ဘယ်မှာက dopamine အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန်ပုံစံဆုလာဘ်အချက်ပြမစောဒကတက်ခဲ့သည် se နှုန်းဒါပေမယ့်စက်သင်ယူမှုများတွင်အသုံးပြုသူတို့အားဆင်တူတဲ့ RPE signal ကို။ dopamine Synaptic plasticity (Calabresi et al modulate နိုင်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူဤသည်တွေ့ရှိချက်, ။ , 2007; Surmeier et al ။ , 2010) dopamine အနာဂတ်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူပုံစံသွင်းသွင်းတဲ့သင်ယူခြင်း (သို့မဟုတ်အားဖြည့်) signal ကိုအဖြစ်ပြုမူသောသီအိုရီမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲသုတေသနကြောင်း dopamine လည်းအရှင် mesocortical နှင့် mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်း (ဂူနှင့် Bern အတွက်တန်ဖိုး signal ကိုအဖြစ်သရုပ်ဆောင်, လာမည့်ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်မှုနှုန်းနှင့် ပတ်သက်. ခန့်မှန်းဝှက်စခွေငျးငှါကိုပြသထားပါတယ် 2002).
dopamine အာရုံခံ၏အဓိက projection site ကိုအဘယ်သူ၏ဆက်သွယ်မှု, တိုကျရိုကျ limbic နှင့်နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex ရန်, dopamine အပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်နှင့်အတူလုပ်ရပ်များမှပြောပြတယ်ရာနှစ်ဦးစလုံး "Go" သင်ယူမှု, ကားမောင်းတဲ့ခန့်မှန်းချက်အမှား signal ကိုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် "နိုငျခွနေတဲ့ယန္တရားပေး striatum ဖြစ်ပါသည် ပြစ်ဒဏ်သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်တစ်ခုမရှိခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းလုပ်ရပ်များမှပြောပြတယ်ရာ Go ကို "သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားခြင်းသင်ယူမှု, မရှိပါ။ ပထမဦးစွာ dopamine အချက်ပြနှစ်ခုသည် Modes (ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းအတွက်လည်ပတ် 2000):, dopamine ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ချိလုပ်သူများအဆင့်ဆင့်ထိန်းညှိနှေးကွေးအများစု dopamine: D ကနေတစ်ဆင့်အချက်ပြရာ2 striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် receptors; အဆိုပါ D ကိုနှစ်ဦးစလုံးကနေတစ်ဆင့်အချက်ပြပေးသော Synaptic dopamine အတွက်ကြီးမားသောတိုးမှဦးဆောင်ပစ်ခတ် dopamine ၏ phasic ပြီးတော့ Activision နေတာ1 နဲ့ D2 အဲဒီ receptor စနစ်များကို။ : D1 receptors dopamine အဘို့အနိမ့်ဆှဖှေဲ့တို (Marcellino et al ။ , 2012) နှင့်သာအကြိုးလှုံ့ဆော်မှု (ဖရန့်, ချဉ်းကပ်ဖို့သင်ယူခြင်း supporting, အပြုသဘော RPEs ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်း phasic dopamine အာရုံခံဆဲလျပြီးတော့ Activision နေတာစဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ Synaptic dopamine အတွက်ကြီးမားသောတိုးတုံ့ပြန် 2005) ။ Dopamine: D2 receptors, အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတို့ကိုလုပ်သူများ dopamine အချက်ပြတုံ့ပြန်ရန်နှင့်အပျက်သဘော RPEs စဉ်အတွင်း dopamine အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်အတွက်ခေတ္တအတိုင်းလိုက်နာကြောင်းလုပ်သူများ dopamine အဆင့်ဆင့်အတွက်ယာယီလျှော့ချ detect လုပ်ဖို့ခွင့်ပြု, dopamine များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားဆှဖှေဲ့ရှိသည်။ ဤသည်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များ (ဖရန့်, ရှောင်ရှားရန်သင်ယူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် 2005) ။ အဆိုပါ cortico-striatal system ကိုတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း (ပုံသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည် (Figure2), 2), အရာ thalamus နှင့်ဤအရပ်မှ cortex (Albin et al အပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ , 1989) ။ အဆိုပါ dorsal striatum ခုနှစ်, receptors သည့် D အတူ segregated နေကြတယ်1 အရေးယူရွေးချယ်ရေးမှဆက်စပ်တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းအတွင်း receptors သည်, D ကိုနေချိန်တွင်2 receptors ဟာသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း (Mink, အတွင်းတုံ့ပြန်မှုတားစီးထိန်းချုပ်ဖို့ 1996) ။ ဤသည်ခွဲခြာဆုလာဘ် (dopamine အတွက်တိုးမြှင့်မျှော်မှန်းသည်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုပြ) နှင့်ပြစ်ဒဏ် (လုပ်သူများ dopamine အတွက်လျှော့ချမျှော်မှန်းထားသည်ထက်တစ်ပိုမိုဆိုးရွားရလဒ်ကိုညွှန်ပြ) နှစ်ဦးစလုံးမောင်းထုတ်ရန် dopamine ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဖရန့်လုပ်သူများ dopamine အဆင့်ဆင့်အတွက်လျှော့ချစီ D ကိုထိန်းချုပ်ထား, အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြအနေဖြင့်ဆုလာဘ်အောက်ပါ phasic dopamine ပြီးတော့ Activision နေတာအပြုသဘောအားကောင်းမြှင့်တင်ရန်အတွက်မော်ဒယ်အဆိုပြုထား1/ တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းနှင့် D ကို2အသီးသီး / သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း, (Cohen ကိုနှင့်ဖရန့်, 2009) ။ ဒီကွန်ပျူတာမှာမော်ဒယ် RPE dopamine signal ကို: D ၏ဆွကနေတဆင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေကနေသင်ယူကိုအားပေးအားမြှောက်ကြောင်းအကြံပြု1 အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များရှောင်ရှားရန်သင်ယူခြင်း D ကိုတစ်လျှော့ချရန်အလယ်တန်းသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း striatal အာရုံခံ၏ disinhibition မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သော်လည်း receptors,2 dopamine ဖြင့်ခေတ္တ (Cohen ကိုနှင့်ဖရန့်, စဉ်အတွင်းအဲဒီ receptor ဆွ 2009) ။ တစ်ဦးကအနုတ်လက္ခဏာရလဒ် (ပြစ်ဒဏ်ဒါမှမဟုတ်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်မရှိခြင်း) ထို့နောက်လုပ်သူများ dopamine အတွက်ယာယီလျှော့ချရေးဦးတည်ရာ, dopamine အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန်အတွက်ခေတ္တရပ်တန့်ပြီးစေပါတယ်။ ဒါဟာ: D ကြောင်းကိုလည်းမှတ်သားရပါမည်2 အဲဒီ receptor ဆွဟာသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း (ဟာနန်ဒက်ဇ်-လိုပက်ဇ် et al အတွက်အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လျော့ကျစေပါတယ်။ , 2000: D အတွက်) ထို့ကြောင့်လျှော့ချ2 အဲဒီ receptor အချက်ပြသည့် inhibitory "အဘယ်သူမျှမ Go ကို" လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤသည် dopamine အာရုံခံခြင်းဖြင့် bidirectional အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်အချက်ပြဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီမော်ဒယ်ပံ့ပိုးမှုမြောက်မြားစွာစမ်းသပ်ချက်များကထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဆေးဝါးများအပေါ်တိုးမြှင့်အပြုသဘောသင်ယူမှုကိုပြသပေမယ့်ဆေးဝါး (ဖရန့် et al ချွတ်နေချိန်မှာအနုတ်လက္ခဏာသင်ယူမှုတိုးတက်။ , 2004) ။ Pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးကိုလည်း (ဖရန့်နှင့် O'Reilly ပုံစံကိုထောကျပံ့, 2006; Pizzagalli et al ။ , 2008) ။ dopamine ၏ striatal လွှတ်ပေးရန် D ကိုကဆန့်ကျင်ဘက်ထုံးစံ၌ထိခိုက်သော corticostriatal Synaptic plasticity ၏ထိန်းချုပ်မှုကနေတဆင့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုနှင့်အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်1 နဲ့ D2 Shen et al (အချက်ပြ။ , 2008) ။ : D1 dopamine အဲဒီ receptor အချက်ပြ Reynolds က et al (ရေရှည်အလားအလာအားပေးအားမြှောက်။ , 2001; Calabresi et al ။ , 2007), D ကိုသော်လည်း2 အဲဒီ receptor အချက်ပြ Gerdeman et al (ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါကိုအားပေးအားမြှောက်။ , 2002; Kreitzer နှင့် Malenka, 2007) ။ ဒီမော်ဒယ်ဟာ striatum ရဲ့အဆင့်မှာအများဆုံးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စမ်းသပ်ပြီးထားပြီးသတိပြုပါ။ fMRI အချက်အလက်များ၏ Multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Vickery et al (အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်အချက်ပြမှုများကိုအများဆုံးအထူးတစ်ခုလုံးကိုတိုကျရိုကျ cortex နဲ့ striatum အတွက်ဦးနှောက်ထဲမှာနေရာအနှံ့ဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ , 2011) ။ ဒီထက်ထိုကဲ့သို့သောတိုကျရိုကျ cortex, insula, hippocampus နှင့် amygdala အဖြစ် striatum ထက်အခြားဦးနှောက်ဧရိယာမှ dopamine စီမံကိန်းကြောင့်အချက်ပြအချက်အလက်များအကြောင်းလူသိများသည်, သို့မဟုတ် RPE signal ကိုဤဒေသများအသုံးပြုဘယ်လောက်။
Basal ganglia မော်ဒယ်။ Basal ganglia အဆိုပါ corticostriato-thalamocortical ဆားကစ်နှစ်ခုအသားအရောင်ခွဲခြားလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများ utility ကိုတွက်ချက်မထွက်ရတစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှမော်ဒယ်။ တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းအမြန် D1 receptors နှင့်စီမံကိန်း၏ Striatal output ကိုအာရုံခံ ...
လူ့အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများမှာတော့ဦးနှောက်ကို Activation ပြောင်းလဲမှုများငွေကြေးဆုလာဘ် (Thut et al တုံ့ပြန်တသမတ်တည်းသရုပ်ပြခဲ့ကြ။ , 1997; Elliott သည် et al ။ , 2000; Knutson et al ။ , 2000; Breiter et al ။ , 2001; O'Doherty et al ။ , 2007) ။ ထို့ပြင်လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောမျှော်လင့်, တုံ့ပြန်ချက်, အနိုင်ရခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးအဖြစ်ငွေကြေးဆုလာဘ်၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဧရိယာများ, ဆိတ်ကွယ်ရာ teased ပါပြီ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်စပ်လျဉ်း dopamine projection က်ဘ်ဆိုက်များအတွင်းအထူးပြုရှိပုံရသည်: ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များမျှော်လင့်သည့်နျူကလိယ accumbens ပါဝင်သည်သော VStr အတွက် activation တိုးပွါး, အကြိုးရလဒ်များ ventral medial prefrontal cortex, dorsal striatum နှင့် posterior cingulate အတွက် activation တိုးမြှင့်နေစဉ် , ဆုလာဘ်ပျက်ကွက်စဉ်အတွင်းဖျောပွဒေသများတွင် Deactivate (Elliott သည် et al အတူ။ , 2000; Breiter et al ။ , 2001; Knutson et al ။ , 2001b; Tricomi et al ။ , 2004) ။ လူသားတွေအတွက် Neuroimaging စမ်းသပ်ချက် VStr လှုပ်ရှားမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်မျှော်မှန်းတန်ဖိုးထက်အဖြစ်ပြင်းအားနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ (Breiter et al နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 2001; Knutson et al ။ , 2001a, 2005; Abler et al ။ , 2006; Yacubian et al ။ , 2006; Rolls et al ။ , 2008) ။ D'Ardenne et al အားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ (2008) ငွေကြေးဆိုင်ရာ RPE အချက်ပြအတွင်း mesolimbic dopamine စနစ်တစ်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါ VStr အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘော RPEs encoded သော်လည်းအဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၏ activation, အ mesolimbic dopamine ဆားကစ်၏မူလအစ, အပြုသဘော RPEs ရောင်ပြန်ဟပ်။ အလားတူပင်တွမ် et al ။ (2007) VStr လှုပ်ရှားမှု bidirectionally အလားအလာငွေကြေးအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကလည်းထိုအအာရုံကြောအချက်ပြ, အလားအလာအကျိုးအမြတ်ထက် ပို. သက်ရောက်မှုဖြစ်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်စိတ်သဘောထားအရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီမူကွဲရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သြဇာသရုပ်ဆောင်-ဝေဖန်မော်ဒယ် (Sutton နှင့် Barto, 1998) ကို VStr အဆိုပါ dorsal striatum ဆုလာဘ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းလုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ဝှက်ရန်ဤအတူတူခန့်မှန်းအမှား signal ကိုအသုံးပြုသည်နေချိန်မှာမျှော်လင့်ထားသည့်အနာဂတ်ဆုလာဘ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကို update လုပ်ဖို့ခန့်မှန်းအမှားများကိုအသုံးပြုအဆိုတင်သွင်း။ ဒါဟာဂုဏ်ထူး fMRI စမ်းသပ်ချက် (O'Doherty et al ထံမှထောက်ခံမှုကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ , 2004; Kahnt et al ။ , 2009) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ RPE တုံ့ပြန်အပြုအမူကို update လုပ်နိုင်စွမ်း Kahnt et al (dorsal striatum နှင့် dopaminergic midbrain အကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူပတျသကျပြခံခဲ့ရသည်။ , 2009) ။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောပုံရိပ်လေ့လာမှုများကအနည်းဆုံး၎င်း၏ striatal စီမံကိန်းများတွင်တစ်ဦး RPE signal ကိုအဖြစ် dopamine ၏သီအိုရီကိုထောက်ခံခဲ့သည်။
အဆိုပါ insula မကြာခဏအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging စမ်းသပ်ချက် (Duncan ကနှင့် Owen အတွက် activated ဖြစ်ပါတယ်, 2000; Yarkoni et al ။ , 2011) ။ function ကသုံးကွဲပြားငျဒသေသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ chemosensory (Pritchard et al နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ ventroanterior ဒေသ, 1999) နှင့်လူမှုစိတ်ခံစားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ (Sanfey et al ။ , 2003; Chang နှင့် Sanfey, 2009), ပိုမိုမြင့်မားသိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့ (Eckert et al နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ dorsoanterior ဒေသ။ , 2009နာကျင်မှုနှင့် sensorimotor အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်) နှင့်တစ်ဦး posterior ဒေသ (Craig, 2002; အာမခံ et al ။ , 2004) ။ ကွဲပြားခြားနားသော striatal ပစ်မှတ်မှကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်လုပ်တဲ့နောက်ကျနေခဲ့သည်ဒေသများစီမံကိန်းကို: အ dorsolateral striatum somatosensation (Chikama et al နှင့်ဆက်စပ်သောနောက်ကျနေခဲ့သည်သွင်းအားစုအားလက်ခံတွေ့ဆုံသော်လည်းအဆိုပါ VStr, အစားအစာနဲ့ဆုလာဘ်မှအဓိကအားဆက်စပ်နောက်ကျနေခဲ့သည်စီမံချက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံ။ 1997).
အဆိုပါနောက်ကျနေခဲ့သည် cortex မသေချာအန္တရာယ်နှင့်ဆုလာဘ်ပါဝင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်စဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ အထူးသ fMRI လေ့လာမှုများအန္တရာယ်-ဆန္ဒရှိဆုံးဖြတ်ချက်များ (Kuhnen နှင့် Knutson အတွက်နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex ပါဝင်ပတ်သက်မှုအစီရင်ခံကြပါပြီ, 2005), အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးခြင်းခန့်မှန်း (Paulus et al ၏ကိုယ်စားပြုမှု။ , 2003), ငွေကြေးဆိုင်ရာမသေချာမရေရာ (Critchley et al ။ , 2001), နှင့်အန္တရာယ်ခန့်မှန်းအမှား (Preuschoff et al ။ , ကုဒ်သွင်း 2008) ။ နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရာအရပျမြားနှငျ့လူနာကျန်းမာသင်တန်းသားများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်၎င်းတို့၏လောင်းကစားပင် et al ရှုံးသောအခါလေးသာမှု (Clark ကမှာမြင့်မားတဲ့စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်အတူအနိုင်ရများ၏အလေးသာမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ , 2008) ။ အခွားသောသုတေသနအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုကြောင်း insula ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လူနာဆုံးဖြတ်ချက်ချအန္တရာယ်များအကျိုးအမြတ်နှင့်အန္တရာယ်များဆုံးရှုံးမှု (Weller et al နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်သောပြောင်းလဲခဲ့ကြခြင်း, ထိုနောက်ကျနေခဲ့သည် cortex ၏သမာဓိအပေါ်မူတည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ , 2009) (သို့သော် Christopoulos et al ကြည့်ပါ။ , 2009) ။ အထူးသ insula ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရွေးချယ်မှုအကြားမျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးကိုကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ဦးဆွေမျိုးအာရုံမခံစားနိုင်သောနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ယခင်သုတေသန insula နှင့် VStr အကြားတစ်ဦး dissociation အန္တရာယ်-ရှာကြံရွေးချယ်မှုရှေ့ VStr activation အတူရှိကွောငျးပြသခဲ့သည်နှင့် anterior insula activation အန္တရာယ်-ဆန္ဒရှိရွေးချယ်မှု (Kuhnen နှင့် Knutson, ခန့်မှန်း 2005) ကို VStr အမြတ်ခန့်မှန်းချက် (Knutson et al ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းအကြံပြု။ , 2001a), anterior insula (Paulus et al ဆုံးရှုံးမှုခန့်မှန်းကိုယ်စားပြုနေစဉ်။ , 2003) ။ လေ့လာမှုများ imaging စဉ်တွင်လည်းအလားအလာဆုလာဘ် (Litt et al ၏ (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော) ကို valence အချက်ပြအတွင်း anterior insula တစ်ဦးထက်ပိုသောယေဘုယျအခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြပါ။ , 2011; Bartra et al ။ , 2013) ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အချက်အလက်များကို anterior နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex အထူးအန္တရာယ်-ဆန္ဒရှိဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချအတွက်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်အတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိကြောင်းငြင်းခုန်။ အမှန်စင်စစ်ကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက် insula တစ်ဦးချင်းစီဆုံးရှုံးမှုခြင်းကိုမနှစ်သက်အဆင့် (Canessa et al နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်တစ်လမ်းအတွက်အလားအလာဆုံးရှုံးမှုကိုခြေရာခံဖို့ပေါ်လာတန်ဖိုးကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ , 2013) ။ ဒါဟာ (အလားအလာအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုအလေးချိန်တဲ့အခါမှာရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအဖြစ် prefrontal-striatal circuitry နှင့်နောက်ကျနေခဲ့သည်-striatal circuitry အကြားတစ်ဦးမညီမမျှ, suboptimal ရွေးချယ်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ Petri ဖြစ်နိုင် 2001a; Goudriaan et al ။ , 2005).
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းပထမဦးဆုံး Molina et al (2000 အတွက်ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့် dopamine အစားထိုးကုထုံးများ၏အခြေအနေတွင်သတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ , 2000) ။ အများပြည်သူအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏တစ်သက်တာပျံ့နှံ့ Shaffer et al (% 0.9 မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2.5 ဖြစ်ပါတယ်။ , 1999) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါမှာပျံ့နှံ့နှုန်းအယ်လ် Ambermoon et (% 1.7 မှ 6.1 ထံမှအဆင့်မြင့်ဖြစ်ကြသည်။ , 2011; Callesen et al ။ , 2013) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်အတူသက်ဆိုင်တဲ့အန္တရာယ်အချက်များ Voon et ပါကင်ဆန်ရောဂါစတင်ခြင်း, မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်အလွဲသုံးစားမှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတော်လေးမြင့်မားတဲ့ Impulse တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်မိသားစုသမိုင်းနှင့်အသစ်အဆန်းရှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရမှတ် (အယ်လ်၏ငယ်ရွယ်စဉ်ဖြစ်ကြသည်။ , 2007b) ။ စိတ်ဝင်စားစရာဤမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အထွေထွေလူဦးရေအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များဆင်တူသည်။ ဒါ့အပြင်အချို့လူနာများတွင် L-dopa မှစွဲလမ်း၏အစီရင်ခံစာများ (ဥပမာ Giovannoni et al တှေရှိခဲ့တယျ။ , 2000), ရှိပြီးသား 1980s အတွက်မှတ်ချက်ချခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း။ သူတို့စွဲတစ်ဦးချင်းစီ၏ပုံမှန်သည့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး type ကိုအပိုင်မထင်ခဲ့ကြသောကြောင့်, ဒါဟာပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆေးဝါးစွဲဖြစ်လာသို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲဖွံ့ဖြိုးနိုင်မတွေ့ရှိရန်ဖြစ်ကောင်းပိုင်းတွင်အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့် (ပါကင်ဆန်ရောဂါစတင်ခြင်းမလာခင်, လုံ့လဝီရိယတိ, တရားရှိဖို့, သတိ, တင်းကျပ်, လူကန်လန်, နှေးကွေးနေ-စနစ်ဖြစ်ပြီး, Impulse နှင့်အသစ်အဆန်းရှာမရှိခြင်းနှင့်အတူ, သူတို့စီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်ဘို့အနိမ့်တစ်သက်တာအန္တရာယ်များရှိသည်, ကော်ဖီသောက်ခြင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းအဖြစ်ဖော်ပြနေကြပါတယ် Menza et al ။ , 1993; Menza, 2000).
Dopamine အစားထိုးကုထုံးပါကင်ဆန်ရောဂါ (Gschwandtner et al အတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ , 2001; Dodd et al ။ , 2005) နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းတစ်လွှတ်သို့မဟုတ်လျော့ချရေးပုံမှန်အား dopamine agonist ဆေး (Gschwandtner et al ၏လျှော့ချရေးသို့မဟုတ်ရပ်နားခြင်းပြီးနောက်မှတ်ချက်ချသည်။ , 2001; Dodd et al ။ , 2005) ။ အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်အစုံအပါအဝင်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်ချေါပေမယ့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် compulsive ဝယ်ရန်ကန့်သတ်ထားဘဲ, dopamine အစားထိုးကုထုံး (Weintraub et al နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အစီရင်ခံခဲ့ကြ။ , 2006; Voon et al ။ , 2007a; Dagher နှင့် Robbins, 2009) ။ Dopamine agonists (pramipexole, ropinirole နှင့် pergolide) L-Dopa monotherapy ထက် သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်ရှိမှပေါ်လာ (Seedat et al ။ , 2000; Dodd et al ။ , 2005; Pontone et al ။ , 2006) ။ အဆိုပါ dopamine agonist လျှော့ချခြင်းနှင့်အတူတူပင်မော်တာတုံ့ပြန်မှုအောင်မြင်ရန် L-Dopa တိုးပွားလာထိခိုက်နစ်နာတစ်ဦးချင်းစီ (Mamikonyan et al အတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းဖျက်သိမ်း။ , 2008), 3000 ပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာရှင်ကျော်၏ cross-section လေ့လာမှုတစ်ခု dopamine agonist ယူပြီး 2.72 (Weintraub et al ကချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အလေးသာတိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိရစဉ်။ , 2010) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ dopamine agonist ကုထုံးဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမကြာသေးမီကထိုကဲ့သို့သောနာမငြိမ်ခြေထောက် syndrome ရောဂါ, fibromyalgia နှင့် prolactinomas (Davis, ကဲ့သို့သောအခြားရောဂါများအတွက်မှတ်ချက်ပြုထားသည် 2007; ကားမောင်းသူ-Dunckley et al ။ , 2007; Quickfall နှင့် Suchowersky, 2007; Tippmann-Peikert et al ။ , 2007; Falhammar နှင့် Yarker, 2009; Holman, 2009) ။ ဒါဟာအချို့လေ့လာမှုများအယ်လ် Molina et (High-ထိုး L-Dopa monotherapy နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့် / သို့မဟုတ် Impulse နှင့် compulsive အစီရင်ခံတင်ပြကြပြီသို့သော်သတိပြုသင့်ပါတယ်။ , 2000ပါကင်ဆန်ရောဂါ), နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ (Smeding et al ။ , 2007), နှင့်မူးယစ်ဆေးရင်တော့မှားမယ်ပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာရှင် (Antonini et al အတွက်။ , 2011), အားလုံး dopamine agonists ၏မရှိခြင်း၌တည်၏။ မည်သို့ပင်ဆိုစေခြင်း, လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားအများစုအတွက်: D မှာသီအိုရီအကြောင်း dopamine ရောကျသောထောက်ခံပါသည်2 အဲဒီ receptor မိသားစုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ဖြစ်ပွားစေရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
dopamine ၏ endogenous အဆင့်ဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲများကို၏စည်းနှောင်ပြောင်းလဲမှုများထံမှပေါ်မူတည်ပြီးခံရဖို့အဘို့အ Positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ပုံရိပ် [ခွင့်ပြု11ကို C] က dopamine D ကိုမှ raclopride2 receptors ။ ပထမဆုံး [11ဒီဧရိယာထဲမှာကို C] raclopride ပေလေ့လာမှု dopamine dysregulation syndrome ရောဂါနှင့်အတူပါကင်ရဲ့လူနာအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Dopamine dysregulation syndrome ရောဂါမကြာခဏချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန် (Lawrence et al နှင့်အတူ comorbid သော dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ compulsive ဆည်းပူးနေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ , 2003) ။ dopamine dysregulation syndrome ရောဂါလူနာတိုးမြှင့် L-Dopa အလားတူကုသပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ (အီဗန် et al ယူပြီးမနှိုင်းယှဉ် VStr dopamine လွှတ်ပေးရန်သွေးဆောင်ပြ။ , 2006) ။ ဤသည် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှကျရောက်နေတဲ့ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာ mesolimbic dopamine circuitry ၏ာင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာရှင်တစ်ဦးဆွေမျိုး hyperdopaminergic ပြည်နယ်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ dopamine reuptake ပို့ဆောင်ရေး (DAT) ၏အာရုံစူးစိုက်မှုပုံဖော်သုံးလေ့လာမှုများထိခိုက်လူနာ (Cilia et al နှိုင်းယှဉ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများ၏ VStr အတွက်လျှော့ချအဆင့်ဆင့်ကိုပြသကြ။ , 2010; Lee က et al ။ , 2014; Voon et al ။ , 2014) ။ လျှော့ချ DAT အာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်နိုင်အညွှန်းကိန်းတစ်ခုခုကိုလျှော့အာရုံကြောဆိပ်ကမ်း (နှင့် dopamine အချက်ပြလျှော့ချ) သို့မဟုတ်လျှော့ချ DAT စကားရပ် (ထို့ကြောင့်လုပ်သူများ dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်) အဖြစ်ကံမကောင်းစွာအဆိုပါတွေ့ရှိချက်, Non-တိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောအယူအဆ supporting, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်လူနာလျှော့ချသရုပ်ပြ [11ကို C] ပါကင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှု (Steeves et al နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ VStr အတွက် binding raclopride ။ , 2009), အရာလည်းဒီအုပ်စုတွင်မြင့်မားသောလုပ်သူများ dopamine နှင့်ကိုက်ညီသည်။ မှတ်ချက်သို့သော်ဒီရလဒ်အလားတူလေ့လာမှု (O'Sullivan et al ပုံတူမဖြစ်တော့ဘူးခံရဖို့ပျက်ကွက်ကြောင်း။ , 2011).
သို့သော်ဤနှစ်ခု [11ကို C] raclopride ပေလေ့လာမှုများ Steeves et al (လောင်းကစားကာလအတွင်းအလားအလာ (dopamine လွှတ်ပေးရေးတစ်ခုအညွှန်းကိန်း) binding VStr ၏ကြီးမြတ်သောလျှော့ချရေးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ , 2009) နှင့်ကြားနေတွေကို (O'Sullivan et al နှိုင်းယှဉ်အစားအစာ, ငွေကြေး, လိင်၏ဆုလာဘ်-related cue ထိတွေ့မှု (ပုံ) အောက်ပါ။ , 2011) ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာအတွက်ထိခိုက်လူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဤသည်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်ရှိသူများလူနာအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဆုလာဘ်-related တွေကိုမှ striatal ဆုလာဘ် circuitry တစ်ခုတိုးလာတုန့်ပြန်အကြံပြုထားသည်။ O'Sullivan et al ၌တည်၏။ (2011) dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုသာ VStr အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ဘာသာရပ်များဦးနှောက် dopamine အဆင့်ဆင့် VStr (ကိရှ et ထက် dorsal အတွက်အများကြီးနိမ့်ဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီရုံကြိုတင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့မှပါးစပ် L-Dopa တစ်ထိုးလက်ခံရရှိတဲ့အခါမှသာ အယ်လ်။ , 1988) ။ ဤရလဒ်သည်အီဗန် et al နေဖြင့်အဆိုပြုထိခိုက်မခံတဲ့အယူအဆတွေနဲ့ထို့ကြောင့်တသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ (2006) ။ ပိုများသောမကြာသေးမီကကြောင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာ Ray et al (ထို midbrain အတွက် dopamine autoreceptors တစ်ဦးလျှော့အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသည်။ , အစီရင်ခံခဲ့သည် 2012), အရာမွငျ့မား dopaminergic Response နှင့်တိုးမြှင့် Impulse (Buckholtz et al နှင့်အတူပတျသကျဖို့လူသိများသည်။ , 2010) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာ dopamine ပေါင်းစပ်စွမ်းရည်အတွက် [18F ကို] DOPA ပေ, ကိုယ်နှိုက်ကရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အခြားစှဲ (Lawrence et al များအတွက်အန္တရာယ်အချက်, disinhibition တစ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအတိုင်းအရှည်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ , 2013) ။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, PET လေ့လာမှုများကြီးထွား dopaminergic သေံနှင့် dopamine agonist ကုသမှုစဉ်အတွင်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးသောသူပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာအတွက်နောက်ခံအားနည်းချက်အဖြစ်တွေကိုဆုချမှတိုးမြှင့် dopamine တုံ့ပြန်မှုဆုံသက်သေအထောက်အထားသည်။
နှစ်နိုင်ငံ anterior cingulate cortex အတွက်လောင်းကစားဝိုင်း-related အမြင်အာရုံတွေကိုမှ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းပြပွဲနှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာ precuneus ခွင့် VStr left နှင့် prefrontal cortex (Frosini et al medial ။ , 2010) ။ ဤသည်ပါကင်ဆန်ရောဂါ (Crockford et al မရှိဘဲရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအလားတူစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်။ , 2005; ko et al ။ , 2009) နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ (Wexler et al ။ , 2001), ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားထိန်းချုပ်မမှန်အပြုအမူစှဲအဖြစ် conceptualized စေခြင်းငှါမြင်ကွင်းကို supporting ။
ပါကင်ဖွင့်ထားတဲ့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါပြပွဲနှင့်အတူရောဂါလူနာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေစဉ်အတွင်းညာဘက် VStr အတွက် BOLD လှုပ်ရှားမှုလျော့ခြင်းနှင့်သိသိသာသာသူတို့၏ကျန်းမာရောဂါ counterparts တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ညာဘက် VStr အတွက်ကျိန်းဝပ်နှောက်သွေးစီးဆင်းမှုကိုလျှော့ချ (Rao က et al ။ , 2010) ။ အလားတူပင်အဲဒါကိုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာရှင်လူနာထိန်းချုပ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အန္တရာယ်လောင်းကစားဝိုင်းဆီသို့တစ်ဘက်လိုက်မှုပြပြီး, Voon et al (VStr လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျလာနေ dopamine agonists တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုယူပြီးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ , 2011) ။ အဆိုပါစာရေးဆရာ dopamine agonists, အရှင်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုမျက်နှာသာ, အားနည်းချက်လူနာအတွက်အန္တရာယ်သတင်းအချက်အလက်ကနေဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု decouple စေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။ နောက်ထပ် fMRI လေ့လာမှု, ပါကင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုး, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါပါကင်ရဲ့လူနာ anterior နောက်ကျနေခဲ့သည်နှင့် orbitofrontal cortex RPE အချက်ပြမှုများကိုလျော့နည်းသွားခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သူတို့ကအစ dopamine agonists အမြတ်ရလဒ်ကနေလေ့လာသင်ယူနှုန်းတိုးပွားလာခြင်း, dopamine agonists ထိန်းချုပ်မှုမမှန် impulse မှဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများတွင် "ပိုကောင်းထက်မျှော်မှန်းထားသည်" ရလဒ်များ (Voon et al ဝှက်ဖို့အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု skew စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, striatal RPE လှုပ်ရှားမှုတိုးလာကြောင်းပြသ ။ , 2010).
striatal dopamine အချက်ပြအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုပြုပါနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းမဖွံ့ဖြိုးပါဘူးသူကိုပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာခွဲခြားစခွေငျးငှါနေစဉ်, dopamine agonists အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ကိုပြောင်းလဲသောလုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားမရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ Dopamine agonists ကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီ၏ဦးနှောက်ဆုလာဘ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ချက်တုံ့ပြန်ရသောလမ်းကိုပြောင်းပေးပါ။ ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ချက်စဉ်အတွင်းကျန်းမာလူကြီးများမှ pramipexole ၏တစ်ခုတည်းထိုး၏အုပ်ချုပ်မှုတစ်ထီဂိမ်း (RIBA et al အတွက် VStr လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားစေ၏။ , 2008) ။ အလားတူပင်ပါကင်ရဲ့လူနာရလဒ်များအရအိပ်ယာ (Cool et al နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက L-Dopa တစ်ထိုးလက်ခံရရှိသည့်အခါလျှော့ချ VStr activation ရှိခဲ့သည်။ , 2007) ။ hypoactivation ၏ဤပုံစံပါကင်ဆန်ရောဂါ (Reuters et al မရှိဘဲရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်တွေ့၏ဆင်တူသည်။ , 2005): တစ် simulated လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်စဉ်အတွင်း, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက် ventromedial prefrontal cortex နှင့် VStr အတွက်ထိန်းချုပ်မှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူ activation လျော့နည်းသွားပြသခဲ့သည်။ လောင်းကစားများ၏ပြင်းထန်မှုအဆိုးဟာ VStr အတွက် BOLD အကျိုးသက်ရောက်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့် hypoactivity လောင်းကစားဝိုင်းပြင်းထန်မှုတစ်ဦးခန့်မှန်းကြောင်းအကြံပြု, prefrontal cortex ventromedial ခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါပါကင်ရဲ့လူနာကျိန်းဝပ် perfusion လျော့အဖြစ်ပါကင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှု (Rao က et al နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ VStr အတွက်ယူပြီးအန္တရာယ်စဉ်အတွင်း BOLD လှုပ်ရှားမှုလျော့ကြတွေ့ရှိခဲ့သည်။ , 2010) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေက dopamine agonists တစ်ဦးချင်းစီဆုလာဘ်ရှာအန္တရာယ်များရွေးချယ်မှု (RIBA et al လုပ်စေကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 2008), ဆုလာဘ်မှနှိမ်နင်း VStr တုံ့ပြန်မှု၏မျက်နှာကို၌တည်၏။
ဒါဟာ fMRI စမ်းသပ်ချက်အတွက် VStr activation သေချာပေါက်လျှော့ချ dopaminergic အချက်ပြညွှန်ပြမထားဘူးလျှော့ချကြောင်းသို့သော်သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်အတော်လေးသနား mesolimbic dopamine အချက်ပြကိုထောကျပံ့ဖို့သက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ ပထမဦးစွာပါကင်ဆန်ရောဂါကုသမှုများအတွက် dopaminergic ဆေးဝါးများ၏ထပ်ခါတလဲလဲဆည်းပူးနေ dopamine အချက်ပြ၏ာင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ VStr ာင်းသောလူသားမြား (Boileau et al အတွက်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါပြသလျက်ရှိသည်။ , 2006) ။ ထိုမှတပါး, ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် striatum ရဲ့ ventral သောအဘို့ကိုအတော်လေးပု dorsal ဒေသများ (ကိရှ et al နှိုင်းယှဉ်ရောဂါအားဖြင့်နှမြောနေသည်။ , 1988) နှင့်အရှင် dopamine အစားထိုးကုထုံး, သာမန်အဆင့်ဆင့်ဖို့ dorsal striatum အတွက် dopamine ချို့တဲ့ဆုံးစဉ်အကောင်းဆုံးအဆင့်ဆင့် (Cool et al ထက်ပိုမိုမြင့်မားဖို့ VStr ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် dopamine အဆင့်ဆင့်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။ , 2007) ။ ဤ "အလွန်အကျွံသုံးစွဲ" သီအိုရီပထမဦးဆုံး Gotham et al နေဖြင့်အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ (1988) အခြို့သိမြင်လိုငွေပြမှုတိုးတက်အောင်နေစဉ်, ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင်း, L-Dopa အုပ်ချုပ်ရေးရှင်းပြဖို့လည်းသည်အခြားနံရံပစ်ကစားနည်း-striatal သိမြင်တာဝန်များကိုအတွက်တိကျတဲ့ချို့ယွင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကျနော်တို့ VStr အတွက်အလွန်အကျွံ dopaminergic ဆွအနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှားများမှဆက်စပ်ပြ dopamine အတွက် dips တော်ကိုမိုက်စေသောတင်ပြသည်။
အဆိုပါ insula လည်းပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှုမှာ, ရဲ et al ။ (2010) ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ် pramipexole () ၏တစ်ခုတည်းထိုးသည်, VStr ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်သည့် VStr နှင့် anterior insula အကြားအပြန်အလှန်မြှင့်တင်ရန်, ဒါပေမဲ့ VStr နှင့် prefrontal cortex အကြားအပြန်အလှန်အားနည်းတွေ့ရှိခဲ့ တိုးမြှင့် Impulse မှဦးဆောင်။ Cilia et al ။ (2008) ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူပါကင်ရဲ့လူနာ insula အပါအဝင် mesocorticolimbic ကွန်ယက်တွင်ဦးနှောက်ဒေသများအတွက် Over-လှုပ်ရှားမှုအနားယူပြသခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု၌, ပါကင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုး, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါဝေဒနာရှင် (ဗန် Eimeren et al anterior နောက်ကျနေခဲ့သည်နှင့် orbitofrontal cortex လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားခဲ့သည်။ , 2009; Voon et al ။ , 2010) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ hypersexuality နှင့်မရှိဘဲပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာရှင်တစ်ဦးလေ့လာမှုမှာ, L-Dopa ၏တစ်ခုတည်းထိုးမှသာ hypersexual လူနာ (Politis et al အတွက်ခေါ်ဆောင်သွားပုံများ, တုံ့ပြန်တွင်တွေ့မြင်ပုံမှန်နောက်ကျနေခဲ့သည် Deactivate ဖျက်သိမ်း။ , 2013) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားသည်ဤရလဒ်များကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်အလားအလာအန္တရာယ်များ (ဆုံးရှုံးမှု) ၏ကြောင်းကိုကျော်အလားအလာအကျိုးအမြတ်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမျက်နှာသာ, အ prefrontal-striatum ဆက်သွယ်မှုနဲ့ insula-striatum ဆက်သွယ်မှုအကြားတစ်ဦးမညီမမျှအကြံပြုလိမ့်မည်။
အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချလေ့လာနေများအတွက်သြဇာမူဘောင် (Kahneman နှင့် Tversky အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, အလားအလာကိုသီအိုရီဖြစ်ပါတယ်1979) ။ သူတို့ရဲ့အလုပျ၏အဓိကတွေ့ရှိချက်အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်, အလားအလာအကျိုးအမြတ်ထက်ပိုကြီးတဲ့ဒီထက်မကမှဆုံးရှုံးမှုများအတွက်စိတ်သဘောထားနှင့်လျော့နည်းတန်ဖိုးရှိသောပိုလုံခြုံအခြားနည်းလမ်းတည်ရှိသည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီကိုပုံမှန်အားဖြင့်အန္တရာယ်ရွေးချယ်မှုအထက်ပါမှအဘို့ဖြစ်၏။ အလားအလာအမြတ်အလားအလာဆုံးရှုံးမှုထက်သိသိသာသာပိုကြီးဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင်ဥပမာလူအများစုတစ်အကြွေစေ့လှန်၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုငြင်းပယ်ပါလိမ့်မယ်။ Impulse အနည်းဆုံးတစ်ဦးလောင်းကစားဝိုင်းအခြေအနေတွင်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုခြင်းကိုမနှစ်သက်တစ်ဦးမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်အဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုခံရနိုင်ပြီး, Over-အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုမှဆွေမျိုးအလားအလာဆုလာဘ်တစ်ခု။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောတန်ဖိုးကိုဝင်ရိုး (တွမ် et al တစ်လျှောက်တွင်အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများအချိုးမညီတွက်ဆကနေအရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်ရလဒ်များကိုရှိမရှိထင်ရှားစေခြင်းငှါဖြစ်နေဆဲ။ , 2007), သို့မဟုတ်အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်သီးခြားစနစ်များအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုအပြန်အလှန် (Kuhnen နှင့် Knutson ကနေ, 2005; de Martino et al ။ , 2010) ။ ဖြစ်နိုင်သည်, နှစ်ဦးစလုံးမော်ဒယ်များမှန်ကန်သောနေသောခေါင်းစဉ်: မကြာသေးမီ fMRI သက်သေအထောက်အထား (Canessa et al ။ 2013) ကို VStr အတွက်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အကျိုးအမြတ်မှ bidirectional တုံ့ပြန်မှုပြ prefrontal cortex ventromedial) အကျိုးအမြတ်များအတွက် (အပြုသဘောနှင့်) ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် amygdala နှင့် insula (အပြုသဘောဆောင်။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်အလားအလာဆုံးရှုံးမှုပိုမို activation အလားအလာကိုသီအိုရီ (Kahneman နှင့် Tversky, အသုံးပြု. တိုင်းတာတစ်ဦးချင်းစီဆုံးရှုံးမှုခြင်းကိုမနှစ်သက်နှင့်အတူ correlating ရှိ၏ 1979) ။ သို့သော်တစ်ကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက် (Canessa et al အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲထင်ဟပ်အလားအလာဆုံးရှုံးမှု, အမည်ရညာဘက် insula နှင့် amygdala မှထူးခြားကိုတုံ့ပြန်ကြောင်းဦးနှောက်ဒေသများတွင်လည်းရှိပါတယ်။ , 2013) ။ ပေါင်းလဒ်ခုနှစ်, VStr, insula နှင့် amygdala အပေါ်ဗဟိုပြုဒေသကွန်ယက်ပုံမှန်အားဖြင့်အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်မှုတစ်ခုလမ်းအတွက်အမြတ်နှင့်အရှုံးမျှော်လင့်တွက်ချက်ပုံရသည်။ ပြည်နယ် fMRI အနားယူနေဖြင့်ဖော်ထုတ်အဖြစ်စိတ်ဝင်စားစရာ dorsal anterior cingulate နှင့်အတူဤအအဆောက်အဦများ, တစ်ဦးအခ်ါဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်ကိုဖွဲ့စည်းရန်။ ဤကွန်ယက် Seeley et al (စိတ်ခံစားမှုအဓိကဖြစ်ရပ်များဖော်ထုတ်မယ်နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ထင်သည်။ , 2007).
အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်အလားအလာအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုနှစ်ခုလုံးကိုကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ခံစားမှု (Loewenstein et al မှတဆင့်အပြုအမူလွှမ်းမိုးအတူတစ်စိတ်ခံစားမှုအခြေခံပေါ်မှာကရှင်းပြသည်နိုင်ပါသည်။ , 2001), ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အမြတ်ခြမ်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပေါ်အမည်ရလှုံ့ဆျောမှု။ ထိုသို့သောမော်ဒယ် amygdala နှင့် insula ဖို့နျူကလိယ accumbens မှယခင်နှင့်နောက်ကိုကြိုးနဲ့တုတ်ပေလိမ့်မည်။ တစ်ခုခုကိုအမှုမှာ, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဤအတရားဝင်စမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့မရှိသေးပါပေမယ့်အတော်လေးလျော့နည်းဆုံးရှုံးမှုဆန္ဒရှိနေသောလူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်းကြောင့်ဆုံးရှုံးမှု၏အဘိုးပြတ်အောက်မှာဆွေမျိုးဖို့, ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်လောင်းကစားအဖြစ်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများအတွက်အန္တရာယ်မှာဖြစ်စေခြင်းငှါ။ စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်သာမန်ဆုံးရှုံးမှုခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ပယ်ဖျက်ခံရထဲမှာ striatum implicating အချို့သက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် striatal dopamine အာရုံခံဆုံးရှုံးလျှော့အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်ဘာသာရပ်များ (အမှတ်တံဆိပ် et al ထိန်းချုပ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ , 2004; Labudda et al ။ , 2010), အထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံးကြိမ်အတွက် dopamine agonists ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးစဉ်, ဒီသဘောထားကိုနောက်ကြောင်းပြန်နှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူနှင့် Impulse (Dagher နှင့် Robbins အားပေးအားမြှောက်, 2009) ။ : D များ၏ကျန်းမာဦးနှောက်စူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်2 dopamine agonists လည်း (လူသားများ RIBA et al အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုတစ်ခုတိုးစေနိုင်ပါတယ်။ , 2008) နှင့်ကြွက် (စိန့်Öngeနှင့် Floresco, 2009) ။ acute: D2/D3 အဲဒီ receptor ဆွလိုက်တန်ဖိုးရှိစစ်ကြောစီရင်ဆုံးရှုံးမှု၏တန်ဖိုးအတွက်ရှုပ်ထွေးအပြောင်းအလဲများကို (ဆုံးရှုံးမှုကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ဆက်လက်လောင်းကစားဝိုင်းဖြစ်ခြင်းလိုက်ဖမ်း) (ကမ့်ဘဲလ်-Meiklejohn et al ထုတ်လုပ်ရန်တွေ့ရှိထားသည်။ , 2011) ။ အတူတူယူ, ဒီ striatum နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်သည်အခြား mesolimbic အဆောက်အဦများအပေါ်သရုပ်ဆောင်, dopamine အကြံပြု, အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက် modulate လိမ့်မည်။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခြင်းဖြင့်မထိခိုက်ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာနှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ dopamine agonist pramipexole ၏တစ်ခုတည်းထိုးတဦးတည်းအမှု (ဗန် Eimeren et al အတွက် orbitofrontal cortex အတွက်ဆုံးရှုံးမှုခန့်မှန်းအမှားနိုင်တဲ့ coding လျှော့ချကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ , 2009) နှင့်အခြား (Voon et al အတွက် orbitofrontal cortex နဲ့ insula ။ , 2010) ။ ပေါင်းလဒ်မှာတော့လုပ်သူများ dopamine လှုပ်ရှားမှုဆုံးရှုံးမှုခန့်မှန်းအချက်ပြလျှော့ချရန်ပုံပေါ်သောကြောင့်အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်လျော့ကျစေနိုင်တယ်။
ကျနော်တို့ပုံ (အစပိုင်းတွင်ဖြစ်နိုင်သည်သီးခြားဦးနှောက်ဒေသများအတွက်အလားအလာဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်တွက်ချက်ထားတဲ့အတွက်အလားအလာသီအိုရီအပေါ်အခြေခံပြီးအထွေထွေမူဘောင်, အဆိုပြုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ဖို့ပေါင်းစည်း (Figure3) .3) ။ ကျနော်တို့တန်ဖိုးတွက်ချက်မှု၌ဤဧရိယာ implicating မြောက်မြားစွာပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (Kable နှင့် Glimcher, အပေါ်အခြေခံပြီး, ထိုအမြတ်မျှော်လင့်သည့် ventral medial prefrontal cortex အတွက်တွက်ချက်ခံရစေခြင်းငှါ, မှနျး 2007; Plassmann et al ။ , 2007; Bartra et al ။ , 2013) ။ အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်သကဲ့သို့, amygdala နှင့် insula အရှုံးမျှော်လင့်ကွန်ပျူတာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါသည်။ တနျဖိုး၏နောက်ဆုံးတွက်ချက်မှုအဘို့တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှ site ကိုအနည်းဆုံးရွေးချယ်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်ရန်အစီအစဉ်များကို update ၏ရည်ရွယ်ချက်, (ဗန် der Meer et al စီစဉ်အရေးယူမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဒေသများမှတရားမျှတစွာတိုက်ရိုက် access ရရှိထားတဲ့သော striatum ဖြစ်ပါသည်။ , 2012) ။ အဆိုပါ striatum နှစ်ဦးစလုံးတုံ့ပြန်မှု-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များအတွက်မွေးရာပါအခန်းကဏ္ဍ (dorsal striatum) (အလက်ဇန်းဒါးနှင့် Crutcher ရှိပြီး 1990) နှင့်ကတန်ဖိုး (Packard နဲ့ Knowlton ၏တွက်ချက်မှုများအတွက်ထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းမတတ်နိုင်ရာနှိုးဆွ-ဆုလာဘ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ် (VStr), ဖန်တီး 2002) ။ ထို့အပြင် VStr မှတဆင့်အပြုအမူရှာကြံစာစားချင်စိတ်ကိုဆုလာဘ်ကားမောင်းနေစဉ် Striatal တန်ဖိုးကိုအချက်ပြမှုများ, အ dorsal striatum ကကမကထပြုခဲ့အနာဂတ်လုပ်ရပ်များ, နည်းဗျူဟာများနှင့်အလေ့အထများ၏မွမ်းမံဖို့ဦးဆောင်အားဖြည့်လုပ်ငန်းစဉ်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ Knutson et al တွေ့မြင် coding တန်ဖိုးကိုအတွက် striatum ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတစ်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ (2008); Bartra et al ။ (2013) ။ အမြတ်နှင့်အရှုံးအကဲဖြတ်စနစ်များအကြားချိန်ခွင်လျှာ dopamine အားဖြင့်အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက် modulated နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ပုံပါ (သွယ်ဝိုက် Basal ganglia လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်သရုပ်ဆောင်, သောလုပ်သူများ dopamine စံပြအဆိုပြု (Figure2) 2) အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်အဖြစ်တငျပွ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုထိန်းညှိ။ ဤတွင်လုပ်သူများ dopamine ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်တိုးချဲ့အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်သူနဲ့ဆက်စပ်မည်ဖြစ်သည်။ ပြောင်းပြန် phasic dopamine, တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်သရုပ်ဆောင်, အကျိုးအမြတ်၏တန်ဖိုးတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါက dopamine agonist cabergoline ပြပွဲ၏တစ်ခုတည်းထိုးပေးထားငယ်ရွယ်ကျန်းမာတဲ့ဘာသာရပ်များကြောင့်ယူဆရတစ် presynaptic အကျိုးသက်ရောက်မှု (အနိမ့်ဆေးများအတွက် cabergoline တစ် D ကိုရန်, လာဘ်တုံ့ပြန် (အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်) တွင်လေ့လာသင်ယူလျှော့ချသောတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံသည်2 agonist မြင့်ဆှဖှေဲ့: D အပေါ်လုပ်ရပ်တွေကနေတဆင့် phasic dopamine အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်လျော့ကျစေပါတယ်2 dopamine အာရုံခံအပေါ် Pre-Synaptic တည်ရှိသော autoreceptor,) (ဖရန့်နှင့် O'Reilly, 2006) ။ ပြောင်းပြန် haloperidol တစ်ဦး: D2 ရန်, ဖြစ်ကောင်းကြောင့် phasic dopamine ပစ်ခတ်ရန်မြှင့်တင်ရန်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ရန်, လာဘ်ထံမှသင်ယူခြင်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ လုပ်သူများ D ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောပါကင်ဆန်ရောဂါ, လူနာဆုံးရှုံးမှု undervalue မှတစ်ဦးချင်းအားနည်းချက်ရှိပါတယ်လျှင်, dopamine agonist ကုထုံးမှလေးစားမှုနှင့်အတူ2 အနုတ်လက္ခဏာဆုလာဘ်နှင့်အတူဆက်စပ် phasic dopamine dips ၏ sensing receptors နှင့်လုပ်ကွက် (ဖရန့် et al ။ , 2004, 2007), ပင်နိမ့်အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်မှုနိုင်ဘူး။ တဦးတည်းအနက် phasic လှုပ်ရှားမှုများ၏ပြင်းထန်မှု: D များ၏လုပ်သူများဆွနေစဉ်အလားအလာဆုလာဘ်၏တန်ဖိုးအပေါ်အမြတ်သတ်မှတ်ကြောင်း2 ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်လုပ်ကွက် receptors ။
အလားအလာသီအိုရီပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့မော်ဒယ်။ (က) အလားအလာရှိသောအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှု၏ utility ကိုအောက်ပါညီမျှခြင်းအားဖြင့်ပေးထား: u(x) = (x)α အလားအလာရှိသောအကျိုးအမြတ်နှင့် u(x) = -λ · (-x)β ဆုံးရှုံးမှု (Kahneman များအတွက် ...
ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာလာသောအခါ dopaminergic ဆေးဝါးများအပေါ်တိုးမြှင့်အပြုသဘောသင်ယူမှုကိုပြသနှင့်ဆေးဝါးကိုချွတ်နေစဉ်အသက်-လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှု (ဖရန့် et al နှိုင်းယှဉ်, အနုတ်လက္ခဏာသင်ယူမှုတိုးတက်။ , 2004) ။ dopamine နှင့်အတူကုသမှု: D2 agonists ယခုပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းဆေးဝါးအသုံးပြုမှုမှသော့ခတ်အဆင့်ဖြစ်သည့်အတွက်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားထိန်းချုပ်မမှန်၏အကြောင်းရင်းအဖြစ်လက်ခံထားပါသည်။ မော်ဒယ်အတွက်: D ဒီမှာအဆိုပြုထား2 ဆွဟာသွယ်ဝိုက် corticostriatal လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်မှုကိုလျှော့ချမယ်။ ကျနော်တို့: D အောက်မှာကြောင်းအကြံပြု2 agonist ကုသမှုအဲဒီလူနာဆုံးရှုံးမှု undervalue နှင့်ပိုပြီးအန္တရာယ်ရှာဖြစ်တဲ့သဘောထားကိုရှိသည်။ ဤသည်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာရှင် '' လိုငွေပြမှုအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက် (Labudda et al သုံးစွဲဖို့ချို့ယွင်းနိုင်စွမ်းကလွှမ်းမိုးသောလေ့လာရေးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ , 2010) ။ အဆိုပါ mesolimbic နှင့် mesocortical စနစ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက် dopamine အချက်ပြ၏အမြတ်, အန္တရာယ်နှင့်အရှုံးအပြောင်းအလဲနဲ့, အထူးသ vmPFC, OFC, insula နှင့် amygdala အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု သာ. ကွီးမွတျအတိမ်အနက်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
အရှုံးသည်းခံစိတ်ပရိုဖိုင်းကိုလည်း norepinephrine အချက်ပြခြင်းဖြင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းမှာဗဟိုသရုပ်ဆောင် beta ကို blocker propranolol ၏တစ်ခုတည်းထိုးဆုံးရှုံးမှု (ရော်ဂျာ et al များ၏ရိပ်မိပြင်းအားကိုလျှော့ချ။ , 2004အဆိုပါ thalamus အတွက် norepinephrine reuptake သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) နှင့်ပုံမှန်မူကွဲ, ပေအားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်, အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက် (Takahashi et al နှင့်အတူပတျသကျ။ , 2013) ။ ဒီအတှကျရှင်းပြချက် norepinephrine အလားအလာဆုံးရှုံးမှုဖို့ arousal တုံ့ပြန်မှုတိုးပွါးနှင့်အနိမ့် norepinephrine အချက်ပြထို့ကြောင့်အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်လျော့ချစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ norepinephrine အာရုံခံလည်းပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ထိခိုက်နေကြသည်နေစဉ်, ရောဂါများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်ထကြွလွယ်သောရှုထောင့်၌မိမိတို့အခန်းကဏ္ဍ, (စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့သေး Vazey နှင့် Aston-ဂျုံးစ်တို 2012).
dopamine: D အကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အသင်းအဖွဲ့2 ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်အဲဒီ receptor ရောကျသောနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်ပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်စွဲလမ်းများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာအားလုံးတစ်ဦးချင်းစီ dopamine အစားထိုးကုထုံးအောက်ပါစွဲလမ်း syndrome မဖွံ့ဖြိုး; ဖြစ်နိုင်သည် neurodegeneration, အာရုံခံစားမှုနှင့် Pre-နေကြလို့ပဲအားနည်းချက်သူတို့ရဲ့သီးခြားပုံစံပေါင်းစပ်တော်အားဖြင့်, mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွက်အတော်လေးထိန်းသိမ်းထား dopamine အချက်ပြရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါဘူးတဲ့သူတွေကို (စွဲလမ်းတစ်မိသားစုသမိုင်းတစ်အန္တရာယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်သက်သေအဖြစ်) ။ ဒါဟာပိုကောင်း mesolimbic ဂီယာကိုလည်းယေဘုယျလူဦးရေ (Buckholtz et al အတွက်အန္တရာယ်အချက်ကြောင်းကိုစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ , 2010) ။ ဒုတိယအချက်ကြောင့်: D ကြောင်းရှင်းပါတယ်2 တစ်ဦးတည်းအဲဒီ receptor ရောကျသောထိုစွဲလမ်း syndrome ရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း: D နေစဉ်1/D2 ထိုကဲ့သို့သော L-Dopa အဖြစ် agonists သူတို့ကိုယ်သူတို့ (Lawrence et al စွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ , 2003), D ကို2 agonists ပုံမှန်အားလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်အုပ်ချုပ်ကြသည်မဟုတ်, မဟုတ်ဘဲသူတို့ထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (O'Sullivan et al ကဲ့သို့သောအခြားစှဲမြှင့်တင်ရန်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ , 2011) ။ ဒါကတိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်ချက် (Collins နှင့်ဝုဒ်ကထောက်ခံသည်, 2009), ကွန်ပျူတာ neuroscience မော်ဒယ်များ (Cohen ကိုနှင့်ဖရန့်, 2009) နှင့်မော်လီကျူးဇီဝဗေဒသက်သေအထောက်အထား (Shen et al ။ , 2008) ထို: D အကြံပြုခြင်း1 အဲဒီ receptor ဆွနေစဉ် D ကိုအားဖြည့်နေပါတယ်2 အဲဒီ receptor ဆွဟာ inhibitory သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ကျနော်တို့က D ကိုအကြံပြု2 ရောကျသော, အားနည်းချက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်, အရှင်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့, အားဖြည့်စနစ်များပေါ်တွင် "ဘရိတ်ဖြန့်ချိ" ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အဆိုပါ D ကို၏အချိန်-သော့ခတ်သဘောသဘာဝ2 အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်သူများ dopamine အပြုအမူ (တို့သည် et al ရှာကြံဆုလာဘ်တခုတခုအပေါ်မှာညျခှနျအားအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့သီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်, ထို dopamine agonist ၏ပြတ်တောက်အပေါ်သို့ဖြေရှင်းရန်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ , 2007; Dagher နှင့် Robbins, 2009).
ကျနော်တို့အားဖြည့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှု၏ dopamine-mediated ပြတ်တောက်မှတပါးအခြားအယန္တရားများတစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါသို့သော်သတိပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, Averbeck et al ။ (2014) ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာ Impulse (အခွင့်ထူးချက်ချင်းအရေးယူတဲ့သဘောထားကို) မှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောအပြုအမူကိုလမ်းညွှန်ဖို့အနာဂတ်သတင်းအချက်အလက်အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းမသေချာမရေရာဖြစ်ကြောင်းအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ဒါ့အပြင်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးလိုငွေပြမှု (Djamshidian et al ။ , 2010) လည်းချို့ယွင်း Self-ထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့် Impulse ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ ဤရွေ့ကားယန္တရားများအပြန်အလှန်သီးသန့်မဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
ဤလုပ်ငန်းကို Crystal အေ Clark ကမှကနေဒါအမျိုးသားသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာသုတေသနကောင်စီထံမှ Alain Dagher နှင့်ပညာသင်ဆုများမှကနျြးမာရေးသုတေသနနှင့်ပါကင် Society ကကနေဒါ၏ကနေဒါ Institutes ထံမှထောက်ပံ့ငွေမှတဆင့်ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။
Abler ခ, Walter ဟာအိပ်ချ်, Erk အက်စ်, Kammerer အိပ်ချ်, Spitzer အမ် (2006) ။ ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု linear function ကိုအဖြစ်ခန့်မှန်းအမှားလူ့နျူကလိယ accumbens အတွက် coded ဖြစ်ပါတယ်။ Neuroimage 31, 790-795 10.1016 / j.neuroimage.2006.01.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Albin RL, Young က AB, Penney JB (1989) ။ Basal ganglia မမှန်များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 12, 366-375 10.1016 / 0166-2236 (89) 90074-x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အလက်ဇန်းဒါး GE, Crutcher MD (1990) ။ Basal ganglia ဆားကစ်၏ functional ဗိသုကာ: အပြိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 13, 266-271 10.1016 / 0166-2236 (90) 90107-ဌ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ambermoon P. , Carter ကအေ, ခန်းမ WD, Dissanayaka NN, O'Sullivan JD (2011) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါလက်ခံရရှိ dopamine အစားထိုးကုထုံးနှင့်အတူလူနာအတွက် Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်: သက်သေအထောက်အထားများနှင့်စှဲသောလယ်များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ စွဲ 106, 283-293 10.1111 / j.1360-0443.2010.03218.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (2000) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ။ ။ 4th Edn, စာသားတည်းဖြတ်မူ, ဝါရှင်တန်ဒီစီ: ယား
et al Antonini အေ, Siri ကို C. , Santangelo G. အ, Cilia R. , Poletti အမ်, Canesi အမ်။ (2011) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူမူးယစ်ဆေး-နုံလူနာ Impulse နှင့် compulsive ။ MOV ။ disorders ။ 26, 464-468 10.1002 / mds.23501 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Averbeck BB, O'Sullivan အက်စ်အက်စ်, Djamshidian အေ (2014) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Impulse နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူ။ Annu ။ ဗျာ Clin ။ Psychol ။ 10, 553-580 10.1146 / annurev-clinpsy-032813-153705 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bartra O. , McGuire JT, Kable JW (2013) ။ အဆိုပါအဘိုးပြတ်စနစ်က: ပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်ဖိုးအာရုံကြောဆက်စပ်ဆန်းစစ် BOLD fMRI စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုကိုသြဒိနိတ်-based Meta-analysis သည်။ Neuroimage 76, 412-427 10.1016 / j.neuroimage.2013.02.063 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bergh C. , Eklund တီ, Sodersten P. , Nordin C. (1997) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ပြောင်းလဲ dopamine function ကို။ Psychol ။ Med ။ 27, 473-475 10.1017 / s0033291796003789 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Boileau ဗြဲ, Dagher အေ, Leyton အမ်, ဂွန် RN, Baker GB ကို, Diksic အမ်, et al ။ (2006) ။ လူသားများတွင်စိတ်ကြွဆေးမှ modeling ာင်း: ကျန်းမာယောက်ျားတစ်ဦး [11C] raclopride / positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 63, 1386-1395 10.1001 / archpsyc.63.12.1386 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Labudda K. , Kalbe အီး, Hilker R. , Emmans ဃ, Fuchs G. အ။ (2004) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချချို့ယွင်း။ ပြုမူနေ။ Neurol ။ 15, 77-85 10.1155 / 2004 / 578354 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Breiter HC, အာရုန်ဗြဲ, Kahneman ဃ, Dale အေ, Shizgal P. (2001) ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းနှင့်အတွေ့အကြုံမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု၏ functional ပုံရိပ်နှင့်ရှုံးသည်။ အာရုံခံဆဲလျ 30, 619-639 10.1016 / s0896-6273 (01) 00303-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Buckholtz JW, Treadway MT, Cowan RL, Woodward ND လီ R. , အန်ဆာရီက MS, et al ။ (2010) ။ လူ့ Impulse အတွက် Dopaminergic ကွန်ယက်ကိုကွဲပြားခြားနားမှု။ သိပ္ပံ 329: 532 10.1126 / science.1185778 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Calabresi P. , Picconi ခ, Tozzi အေ, Di သော Filippo အမ် (2007) ။ corticostriatal Synaptic plasticity ၏ Dopamine-mediated စည်းမျဉ်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 30, 211-219 10.1016 / j.tins.2007.03.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Callesen ကို MB, Scheel-Kruger ဂျေ, Kringelbach ML, Moller အေ (2013) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားထိန်းချုပ်မမှန်များ၏စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ ဂျေ Parkinson dis ။ 3, 105-138 10.3233 / JPD-120165 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al ကမ့်ဘဲလ်-Meiklejohn ဃ, Wakeley ဂျေ, ဟားဘတ် V. , ကွတ်ဂျေ, Scollo P. , Ray MK ။ (2011) ။ serotonin နဲ့ dopamine ဆုံးရှုံးမှုကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်လောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ဖြည့်စွတ်အခန်းကဏ္ဍကစား။ Neuropsychopharmacology 36, 402-410 10.1038 / npp.2010.170 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကမ့်ဘဲလ်-Meiklejohn DK, Woolrich မဂ္ဂါဝပ်, Passingham RE, ရော်ဂျာ RD (2008) ။ ရပ်တန့်ရန်လာသောအခါသူတို့သည် သိ. : ဆုံးရှုံးမှုလိုက်ဖမ်း၏ဦးနှောက်ယန္တရားများ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 63, 293-300 10.1016 / j.biopsych.2007.05.014 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Canessa N. , Crespi C. , Motterlini အမ်, Baud-Bovy et al G. အ, Chierchia G. အ, Pantaleo G. အ။ (2013) ။ အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်အတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအာရုံကြောအခြေခံ။ ဂျေ neuroscience ။ 33, 14307-14317 10.1523 / jneurosci.0497-13.2013 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Castellani ခ, Rugle L. (1995) ။ Impulse, အာရုံခံစားမှုရှာခြင်းနှင့်တဏှာအပေါ်အရက်သမားနှင့်ကိုကင်းအလွဲသုံးစားလုပ်ဖို့ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ int ။ ဂျေစွဲ။ 30, 275-289 10.3109 / 10826089509048726 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cavedini P. , Riboldi G. အ, Keller R. , D'Annucci အေ, Bellodi L. (2002) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းလူနာတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 51, 334-341 10.1016 / s0006-3223 (01) 01227-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chang LJ, Sanfey AG က (2009) ။ မမေ့နိုင်သောရာဇသံကို? မျှော်လင့်ချိုးဖောက်မှုများစီးပွားရေးညှိနှိုင်းအောက်ပါတိုးမြှင်လူမှုရေးမှတ်ဉာဏ်မြှင့်တင်ရန်။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 3: 36 10.3389 / neuro.08.036.2009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chikama အမ်, McFarland ရော်ဘာ, Amar DG, Haber SN (1997) ။ အဆိုပါ striatum ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဒေသများသို့နောက်ကျနေခဲ့သည် cortical အဆိုပြုချက်များကယင်းမျောက်အတွက် cortical cytoarchitectonic အဖှဲ့အစညျးနှငျ့ပတျသကျ။ ဂျေ neuroscience ။ 17, 9686-9705 [PubMed]
Christopoulos GI, Tobler PN, Bossaerts P. , Dolan RJ, Schultz ဒဗလျူ (2009) ။ တန်ဖိုးအန္တရာယ်နှင့်စွန့်စားမှုအောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ပံ့ပိုးအန္တရာယ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ ဂျေ neuroscience ။ 29, 12574-12583 10.1523 / JNEUROSCI.2614-09.2009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Cilia R. , Ko JH, ချိုအက်စ်အက်စ်, ဗန် Eimeren တီ, Marotta G. အ, Pellecchia G. အ။ (2010) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူလူနာများ၏ ventral striatum အတွက် dopamine Transporter သိပ်သည်းဆလျှော့ချ။ Neurobiol ။ dis ။ 39, 98-104 10.1016 / j.nbd.2010.03.013 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Cilia R. , Siri ကို C. , Marotta G. အ, Isaias IU သည်, De Gaspari ဃ, Canesi အမ်။ (2008) ။ Parkinson ရောဂါအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအခြေခံ functional မူမမှန်။ Arch ။ Neurol ။ 65, 1604-1611 10.1001 / archneur.65.12.1604 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Clark ကအယ်လ်, Bechara အေ, Damasio အိပ်ချ်, Aitken MR, Sahakian BJ, Robbins TW (2008) ။ နောက်ကျနေခဲ့သည်၏သက်ရောက်မှု Differential နှင့်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအပေါ် prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည် ventromedial ။ ဦးနှောက် 131, 1311-1322 10.1093 / ဦးနှောက် / awn066 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cohen ကို MX, ဖရန့် MJ (2009) ။ သင်ယူမှု, memory နဲ့ရှေးခယျြမှုအတွက် Basal ganglia function ကို၏ Neurocomputational မော်ဒယ်များ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 199, 141-156 10.1016 / j.bbr.2008.09.029 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Collins က GT ကို, ဝုဒ် JH (2009) ။ ကြွက်များတွင် quinpirole များ၏တုံ့ပြန်မှု-ထိန်းသိမ်းခြင်းသက်ရောက်မှုအပေါ် conditional အားဖြည့်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 20, 492-504 10.1097 / fbp.0b013e328330ad9b [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
R. , Lewis က SJG, Clark ကအယ်လ်, Barker RA, Robbins TW (2007) အေး။ L-DOPA ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်သင်ယူမှုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်စဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက်လှုပ်ရှားမှု disrupts ။ Neuropsychopharmacology 32, 180-189 10.1038 / sj.npp.1301153 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Craig အေဒီ (2002) ။ ဘယ်လိုခံစားရလဲ? Interoception: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကမ္မအခွအေနေ၏အသိ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 3, 655-666 10.1038 / nrn894 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Critchley HD ကို Mathias CJ, Dolan RJ (2001) ။ မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းမသေချာမရေရာနဲ့ arousal စပ်လျဉ်းလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု။ အာရုံခံဆဲလျ 29, 537-545 10.1016 / s1053-8119 (01) 91735-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Crockford DN, Goodyear ခ, Edwards ကဂျေ, Quickfall ဂျေ, El-Guebaly N. (2005) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက် Cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 58, 787-795 10.1016 / j.biopsych.2005.04.037 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
D'Ardenne K. , လူယာသည် SM, Nystrom LE, Cohen ကို JD (2008) ။ လူ့ ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopaminergic အချက်ပြမှုများကိုထင်ဟပ် BOLD တုံ့ပြန်မှု။ သိပ္ပံ 319, 1264-1267 10.1126 / science.1150605 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dagher အေ, Robbins TW (2009) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စွဲလမ်း, dopamine: ပါကင်ဆန်ရောဂါကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ အာရုံခံဆဲလျ 61, 502-510 10.1016 / j.neuron.2009.01.031 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Davis အမ် (2007) ။ တစ်ဦး pituitary prolactinoma အတူလူနာအတွက် cabergoline ကုထုံးနဲ့ဆက်စပ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ ဂျေ Neuropsychiatry Clin ။ neuroscience ။ 19, 473-474 10.1176 / appi.neuropsych.19.4.473 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
de Martino ခ, Camerer CF, အဒေါ့ဖ် R. (2010) ။ Amygdala ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုခြင်းကိုမနှစ်သက်ရှင်းလင်းစေပါတယ်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 107, 3788-3792 10.1073 / pnas.0910230107 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
di Chiara G. အ, Imperato အေ (1988) ။ လူသားမြားသဖွငျ့စော်ကားမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျား၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 85, 5274-5278 10.1073 / pnas.85.14.5274 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Djamshidian အေ, Jha အေ, O'Sullivan အက်စ်အက်စ်, et al Silveira-Moriyama L. , Jacobson C. , Brown က P. ။ (2010) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူထကြွလွယ်သောနှင့် nonimpulsive လူနာအတွက်အန္တရာယ်နှင့်သင်ယူမှု။ MOV ။ disorders ။ 25, 2203-2210 10.1002 / mds.23247 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dodd ML, Klos KJ, Bower JH, Geda သင်တို့က, ယောသပ်သည် Ka, Ahlskog je (2005) ။ ပါကင်ရောဂါကုသရန်အသုံးပြုမူးယစ်ဆေးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ Arch ။ Neurol ။ 62, 1377-1381 10.1001 / archneur.62.9.noc50009 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al ကားမောင်းသူ-Dunckley ED, Noble BN, Hentz JG, Evidente VG, Caviness ဖြစ်မှု, ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ဂျေ။ (2007) ။ လောင်းကစားခြင်းနှင့်အညစ်ခြေထောက် syndrome ရောဂါအတွက် dopaminergic ဆေးဝါးများနှင့်အတူတိုးပွားလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ။ Clin ။ Neuropharmacol ။ 30, 249-255 10.1097 / wnf.0b013e31804c780e [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Duncan ကဂျေ, Owen လေး (2000) ။ ကွဲပြားခြားနားသိမြင်တောင်းဆိုချက်များအားဖြင့်စုဆောင်းလူ့တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ဘုံဒေသများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 23, 475-483 10.1016 / s0166-2236 (00) 01633-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Duvarci ဗြဲ, Varan အေ (2000) ။ တူရကီရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏ဖော်ပြရန် features တွေ။ Scand ။ ဂျေ Psychol ။ 41, 253-260 10.1111 / 1467-9450.00195 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Eckert MA, Menon V. , Walczak အေ, Ahlstrom ဂျေ, Denslow အက်စ်, Horwitz အေ, et al ။ (2009) ။ လက်ျာ anterior insula: အ ventral အာရုံစူးစိုက်မှုစနစ်၏နှလုံးမှာ။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ 30, 2530-2541 10.1002 / hbm.20688 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Elliott သည် R. , Friston KJ, Dolan RJ (2000) ။ လူ့ဆုလာဘ်စနစ်များအတွက် Dissociable အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 20, 6159-6165 [PubMed]
အီဗန် AH, ဖြစ်လာပါသည် N. , လောရင့်အေဒီ, Tai YF, အယူခံအက်စ်, Doder အမ်, et al ။ (2006) ။ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု ventral striatal dopamine ဂီယာ senstized ဆက်စပ်။ အမ်း။ Neurol ။ 59, 852-858 10.1002 / ana.20822 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Falhammar အိပ်ချ်, Yarker JY (2009) ။ cabergoline-ကုသ prolactinoma အတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် hypersexuality ။ Med ။ ဂျေ Aust ။ 190, 97 [PubMed]
ဖရန့် MJ, O'Reilly RC (2006) ။ လူ့သိမှတ်ခံစားမှုထဲမှာ striatal dopamine function ကိုတစ် mechanistic အကောင့်: cabergoline နှင့် haloperidol နှင့်အတူ psychopharmacological လေ့လာမှုများ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 120, 497-517 10.1037 / 0735-7044.120.3.497.supp [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖရန့် MJ, Samanta ဂျေ, Moustafa AA ကို, Sherman SJ (2007) ။ ပါကင်အတွက် Impulse, နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွခြင်းနှင့်ဆေးဝါး: သင်၏မြင်းများကိုင်ထားပါ။ သိပ္ပံ 318, 1309-1312 10.1126 / science.1146157 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖရန့် MJ, Seeberger LC, O'Reilly RC (2004) ။ မုန္လာဥနီ by သို့မဟုတ်ချောင်းကို by: သိမြင်မှုအားဖြည့် Parkinson အတွက်သင်ယူမှု။ သိပ္ပံ 306, 1940-1943 10.1126 / science.1102941 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖရန့် MJ (2005) ။ အဆိုပါ Basal ganglia အတွက် dynamic dopamine မော်ဂျူ: Medical နှင့် nonmedicated Parkinson အတွက်သိမြင်မှုလိုငွေပြမှု၏ neurocomputational အကောင့်။ ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ 17, 51-72 10.1162 / 0898929052880093 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Frosini ဃ, Pesaresi ဗြဲ, et al Cosottini အမ်, Belmonte G. အ, ရော့စီ C. , Dell'Osso L. ။ (2010) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို။ MOV ။ disorders ။ 25, 2449-2453 10.1002 / mds.23369 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gerdeman GL, Ronesi ဂျေ, မေတ္တာရှင် DM (2002) ။ Postsynaptic endocannabinoid လွှတ်ပေးရေး striatum အတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါမှအရေးပါသည်။ နတ်။ neuroscience ။ 5, 446-451 10.1038 / nn832 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Giovannoni G. အ, O'Sullivan JD, Turner K. , Manson AJ, Lees AJ (2000) ။ dopamine အစားထိုးကုထုံးအပေါ်ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် Hedonistic homeostatic dysregulation ။ ဂျေ Neurol ။ Neurosurg ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 68, 423-428 10.1136 / jnnp.68.4.423 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Goodman အေ (2008) ။ စွဲလမ်း၏ Neurobiology: တစ်ခု Integrated ပြန်လည်သုံးသပ်။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ Pharmacol ။ 75, 266-322 10.1016 / j.bcp.2007.07.030 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gotham လေး, Brown က RG, Marsden CD ကို (1988) ။ ပါကင်ဖွင့် '' အပေါ် '' ရောဂါနှင့် 'ပိတ်ထား' levodopa နှင့်အတူလူနာအတွက် '' တိုကျရိုကျ '' သိမြင် function ကို။ ဦးနှောက် 111 (Pt ။ 2), 299-321 10.1093 / ဦးနှောက် / 111.2.299 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Goudriaan AE, Oosterlaan ဂျေ, က de Beurs အီး, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါးဒဗလျူ (2005) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ, အရက်မှီခို, Tourette syndrome ရောဂါနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကြားတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်။ ဦးနှောက် Res ။ Cogn ။ ဦးနှောက် Res ။ 23, 137-151 10.1016 / j.cogbrainres.2005.01.017 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို (2000) ။ dopamine စနစ်ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အရက်နှင့် psychostimulant တဏှာကိုနားလည်ဘို့က၎င်း၏ဂယက်၏လုပ်သူများ / phasic မော်ဒယ်။ စွဲ 95, 119-128 10.1046 / j.1360-0443.95.8s2.1.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
je, ဘရူဂျာ Potenza MN (2006) ပေးသနား။ ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏ neurobiology ။ CNS Spectr ။ 11, 924-930 [PubMed]
Gschwandtner U. , Aston ဂျေ, တွဲဖက်ပါမောက္ခ Renaud အက်စ်, Fuhr P. (2001) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ Clin ။ Neuropharmacol ။ 24, 170-172 10.1097 / 00002826-200105000-00009 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hakyemez HS, Dagher အေ, Smith က SD, Zald DH (2008) ။ တစ်ဦး passive ငွေကြေးဆုလာဘ်တာဝန်စဉ်အတွင်းကျန်းမာလူသားတွေအတွက် Striatal dopamine ဂီယာ။ Neuroimage 39, 2058-2065 10.1016 / j.neuroimage.2007.10.034 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဟာနန်ဒက်ဇ်-လိုပက်ဇ်အက်စ်, Tkatch တီ, et al ဖာရ-Garci အီး, Galarraga အီး, Bargas ဂျေ, Hamm အိပ်ချ်။ (2000) ။ striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် D2 dopamine receptors တစ်ဝတ္ထု PLC [beta ကို] 2-IP1-calcineurin-အချက်ပြအဆငျ့ဆငျ့ကနေတဆင့် L-type ကို Ca3 + ရေစီးကြောင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လျှော့ချပေးပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 20, 8987-9895 [PubMed]
Holman အေ (2009) ။ fibromyalgia ကုသရန်အသုံးပြု pramipexole နှင့်ဆက်စပ် Impulse ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအပြုအမူတွေ။ ဂျေလောင်းကစားဝိုင်း။ လုံး။ 25, 425-431 10.1007 / s10899-009-9123-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Huettel လုပ် SA, Stowe CJ, ဂေါ်ဒွန် EM, Warner BT, Platt ML (2006) ။ စွန့်စားမှုနှင့်အမရေရာဒွိဟများအတွက်စီးပွားရေးဦးစားပေး၏အာရုံကြောလက်မှတ်ပေါင်း။ အာရုံခံဆဲလျ 49, 765-775 10.1016 / j.neuron.2006.01.024 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kable JW, Glimcher PW (2007) ။ intertemporal ရွေးချယ်မှုစဉ်အတွင်းပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်ဖိုးကိုများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ နတ်။ neuroscience ။ 10, 1625-1633 10.1038 / nn2007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kahneman ဃ, Tversky အေ (1979) ။ အလားအလာသီအိုရီ: အန္တရာယ်အောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Econometrica 47, 263-291 10.2307 / 1914185 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kahnt တီ, ပန်းခြံစတုရန်းမိုင်, Cohen ကို MX, Beck အေ, Heinz အေ, Wrase ဂျေ (2009) ။ လူသားတွေအတွက် striatal-midbrain ဆက်သွယ်မှု Dorsal စစ်ကူဆုံးဖြတ်ချက်များလမ်းပြအသုံးပြုကြသည်ကိုဘယ်လိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ 21, 1332-1345 10.1162 / jocn.2009.21092 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကိရှ SJ, Shannak K. , Hornykiewicz O. (1988) ။ idiopathic ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများ၏ striatum အတွက် dopamine ဆုံးရှုံးမှုမညီမညာဖြစ်နေသောပုံစံ။ Pathophysiologic နှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ N. Engl ။ ဂျေ Med ။ 318, 876-880 10.1056 / nejm198804073181402 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Knutson ခဒမ် CM, Fong သည် GW, Hommer ဃ (2001a) ။ တိုးမြှင့်ငွေကြေးဆုလာဘ်များမျှော်လင့်ရွေးချယ်နျူကလိယ accumbens စုဆောင်းလေ့ကျင့်။ ဂျေ neuroscience ။ 21: RC159 [PubMed]
Knutson ခ, Greer သည် SM (2008) ။ Anticipatory ထိခိုက်စေ: ရွေးချယ်မှုများအတွက်အာရုံကြောဆက်စပ်နှင့်အကျိုးဆက်များ။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond B ကို Biol ။ သိပ္ပံ။ 363, 3771-3786 10.1098 / rstb.2008.0155 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Knutson ခ, Delgado MR, Phillips က Pem (2008) ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်ဦးနှောက်, eds Camerer C. , Glimcher PW, Fehr အီး, Poldrack RA, အယ်ဒီတာများ: Neuroeconomics အတွက် "ဟုအဆိုပါ striatum အတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်ဖိုးကိုယ်စားပြုမှု" ။ (နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း;), 398-406
Knutson ခ, Fong သည် GW, အဒမ် CM, Varner JL, Hommer ဃ (2001b) ။ အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ် fMRI နှင့်အတူဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်၏ Dissociation ။ Neuroreport 12, 3683-3687 10.1097 / 00001756-200112040-00016 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Knutson ခ, တေလာဂျေ, Kaufman အမ်, Peterson R. , ဂလိုဗာဂျီ (2005) ။ မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးဖြန့်ဝေအာရုံကြောကိုယ်စားပြုမှု။ ဂျေ neuroscience ။ 25, 4806-4812 10.1523 / JNEUROSCI.0642-05.2005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Knutson ခ, Westdorp အေ, ခိုင်ဆာအီး, Hommer ဃ (2000) ။ တစ်ငွေကြေးမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးတာဝန်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု FMRI visualization ။ Neuroimage 12, 20-27 10.1006 / nimg.2000.0593 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ko CH, လျူ GC, Hsiao အက်စ်, ယန်း JY ယန် MJ, လင်း WC, et al ။ (2009) ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်း၏ဂိမ်းကစားတတ်ပြီးသူနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ ဂျေ Psychiatric ။ res ။ 43, 739-747 10.1016 / j.jpsychires.2008.09.012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kreitzer AC အ, Malenka RC (2007) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါမော်ဒယ်များအတွက် striatal, LTD နှင့်မော်တာလိုငွေပြမှု၏ Endocannabinoid-mediated ကယ်ဆယ်ရေး။ သဘာဝတရား 445, 643-647 10.1038 / nature05506 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kuhnen CM, Knutson ခ (2005) ။ ဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ အာရုံခံဆဲလျ 47, 763-770 10.1016 / j.neuron.2005.08.008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Labudda K. , အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Mertens အမ်, Ollech ဗြဲ, Markowitsch HJ, Woermann အပြည်ပြည်သွား (2010) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်အန္တရာယ်အခွအေနေအောက်မှာအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်: တစ်အပြုအမူနှင့် fMRI လေ့လာမှု။ ပြုမူနေ။ Neurol ။ 23, 131-143 10.1155 / 2010 / 743141 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လောရင့်အေဒီ, Brooks DJ သမား, Whone AL (2013) ။ Ventral striatal dopamine ပေါင်းစပ်စွမ်းရည်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ဘဏ္ဍာရေးသာမန်ထက်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ တပ်ဦး။ Psychol ။ 4: 90 10.3389 / fpsyg.2013.00090 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လောရင့်အေဒီ, အီဗန် AH, Lees AJ (2003) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine အစားထိုးကုထုံး၏ compulsive အသုံးပြုမှု: ကော်လံကလွဲနေတယ်သွားပြီဆုလာဘ်စနစ်များ? ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet Neurol ။ 2, 595-604 10.1016 / S1474-4422 (03) 00529-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lee က JY, Seo SH ကင်မ် YK, Yoo HB ကင်မ်သင်တို့က, သီချင်း IC, et al ။ (2014) ။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာ Extrastriatal dopaminergic အပြောင်းအလဲများကို။ ဂျေ Neurol ။ Neurosurg ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 85, 23-30 10.1136 / jnnp-2013-305549 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Litt အေ, Plassmann အိပ်ချ်, Shiv ခ, Rangel အေ (2011) ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းစဉ်အတွင်းအဘိုးပြတ်နှင့် saliency အချက်ပြမှုများ Dissociating ။ Cereb ။ cortex 21, 95-102 10.1093 / cercor / bhq065 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lobo DS, ကနေဒီ JL (2006) ။ လောင်းကစားများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏မျိုးရိုးဗီဇ။ CNS Spectr ။ 11, 931-939 [PubMed]
Loewenstein gf, Weber နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ, Hsee CK, Welch N. (2001) ။ ခံစားချက်တွေကိုအဖြစ်စွန့်စားမှု။ Psychol ။ နွားလား။ 127, 267-286 10.1037 / 0033-2909.127.2.267 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mamikonyan အီး, Siderowf အေဒီ, et al Duda je, Potenza MN, ဦးချိုအက်စ်, Stern ပာကို MB ။ (2008) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားထိန်းချုပ်မမှန်များ၏ရေရှည်နောက်ဆက်တွဲ။ MOV ။ disorders ။ 23, 75-80 10.1002 / mds.21770 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Marcellino ဃ, Kehr ဂျေ, Agnati LF, Fuxe K. (2012) ။ receptors -like: D (2) သာရှိပြီးပြည်ပမှ -like: D (1) အတွက် dopamine ၏ဆှဖှေဲ့တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပေတွေ့ရှိချက်ပြန်ဆိုအတွက်အသံအတိုးအကျယ် transmission အတွက်ဆီလျော်။ synapses 66, 196-203 10.1002 / syn.21501 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Menza MA, Golbe LI, Cody RA, Forman NE (1993) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Dopamine-related ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ။ အာရုံကြော 43 (Pt ။ 1), 505-508 10.1212 / wnl.43.3_part_1.505 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Menza MA (2000) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ Curr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုကိုယ်စားလှယ်။ 2, 421-426 10.1007 / s11920-000-0027-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mink JW (1996) ။ အဆိုပါ Basal ganglia: ယှဉ်ပြိုင်မော်တာအစီအစဉ်များအာရုံစိုက်ရွေးချယ်ရေးနှင့်တားစီး။ prog ။ Neurobiol ။ 50, 381-425 10.1016 / s0301-0082 (96) 00042-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Molina JA, Sainz-Artiga MJ, Fraile A. , Jimenez-Jimenez FJ, Villanueva C. , Orti-Pareja M. et al ။ (2000) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း - ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်တစ်ခုလော။ Mov ။ ဖျက်သိမ်းသည်။ 15, 869-872 10.1002 / 1531-8257 (200009) 15:5<869 :: အကူအညီ-mds1016> 3.0.co; 2-i [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂူ PR စနစ်, Bern GS (2002) ။ အာရုံကြောဘောဂဗေဒနှင့်အဘိုးပြတ်၏ဇီဝအလွှာဟာ။ အာရုံခံဆဲလျ 36, 265-284 10.1016 / s0896-6273 (02) 00974-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ထို Y. ဒေါ် ND, ယောလဃဒါယန်း P. (2007) ။ လုပ်သူများ dopamine: အခွင့်အလမ်းစရိတ်နှင့်တုန့်ပြန်သန်စွမ်း၏ထိန်းချုပ်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 191, 507-520 10.1007 / s00213-006-0502-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
O'Doherty ဂျေဒါယန်းပီ, Schultz ဂျေ, Deichmann R. , Friston K. , Dolan RJ (2004) ။ ဆာအေးစက်အတွက် ventral နှင့် dorsal striatum ၏ Dissociable အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ 304, 452-454 10.1126 / science.1094285 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
O'Doherty JP, Hampton အေကင်မ်အိပ်ချ် (2007) ။ မော်ဒယ်-အခြေခံပြီး fMRI နှင့်သင်ယူမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းဆုချရန်၎င်း၏လျှောက်လွှာ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1104, 35-53 10.1196 / annals.1390.022 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
O'Sullivan အက်စ်အက်စ်, Wu K. , Politis အမ်, လောရင့်အေဒီ, အီဗန် AH, Bose ကို SK ကို, et al ။ (2011) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ-ဆက်စပ်ထကြွလွယ်သော-compulsive အပြုအမူတွေအတွက် Cue-သွေးဆောင် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ဦးနှောက် 134 (Pt ။ 4), 969-978 10.1093 / ဦးနှောက် / awr003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ochoa C. , Alvarez-Moya EM, Penelo အီး, Aymami MN, et al ဂိုမက်ဇ-Pena အမ်, ဖာနန်ဒက်ဇ-Aranda အက်ဖ်။ (2013) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုငွေပြမှု: မရေရာဒွိဟနှင့်အန္တရာယ်အောက်မှာလုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. အလုပ်အမှုဆောင် functions များ, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအသိပညာနှင့် Impulse ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ နံနက်။ ဂျေစွဲ။ 22, 492-499 10.1111 / j.1521-0391.2013.12061.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Packard တို့ MG, Knowlton BJ (2002) ။ အဆိုပါ Basal Ganglia ၏သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ 25, 563-593 10.1146 / annurev.neuro.25.112701.142937 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Paulus အမတ်, Rogalsky C. , Simmons အေ, Feinstein JS, Stein ကို MB (2003) ။ အန္တရာယ်-ယူပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းညာဘက် insula အတွက်တိုးမြှင့် activation ရှောင်ရှားခြင်းနှင့် neuroticism ထိခိုက်စေနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ Neuroimage 19, 1439-1448 10.1016 / s1053-8119 (03) 00251-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Petri မိုင်, Stinson FS, Grant က BF (2005) ။ DSM-IV ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်၏ Comorbidity: အရက်အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် epidemiological စစ်တမ်းကနေရလဒ်တွေကိုနှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများ။ ဂျေ Clin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 66, 564-574 10.4088 / jcp.v66n0504 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Petri မိုင် (2001a) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်နှင့်မပါဘဲ, လျှော့စျေးမြင့်မားတဲ့နှုန်းထားမှာဆုလာဘ်နှောင့်နှေး။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 110, 482-487 10.1037 // 0021-843x.110.3.482 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Petri မိုင် (2001b) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် Impulse ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 63, 29-38 10.1016 / s0376-8716 (00) 00188-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pizzagalli ဃ, အီဗင်အေ, et al Schetter အဲရီကာ C. , ဖရန့် MJ, Pajtas P. , Santesso ဃ။ (2008) ။ တစ်ဦး dopamine agonist ၏လူပျိုထိုးလူသားတွေအတွက်သင်ယူမှုအားဖြည့်ချို့ယွင်း: ဆုလာဘ်တုန့်ပြန်တဲ့ဓာတ်ခွဲခန်း-based အတိုင်းအတာထဲကနေအမူအကျင့်သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology [(Berl) 196, 221-232 10.1007 / s00213-007-0957-y ကPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Plassmann အိပ်ချ်, O'Doherty ဂျေ, Rangel အေ (2007) ။ Orbitofrontal cortex နေ့စဉ်စီးပွားရေးငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာဆပ်ဖို့စိတ်အားထက်သန် encodes ။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 9984-9988 10.1523 / jneurosci.2131-07.2007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Politis အမ်, ချေးငွေများ C. , Wu K. , O'Sullivan အက်စ်အက်စ်, Woodhead Z. , Kiferle L. , et al ။ (2013) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine ကုသမှု-နှင့်ဆက်စပ် hypersexuality အတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ ဦးနှောက် 136 (Pt ။ 2), 400-411 10.1093 / ဦးနှောက် / aws326 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pontone G. အ, Williams က JR, Bassett အက်စ်အက်စ်, နားမှာ L. (2006) ။ ပါကင်ရောဂါအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားထိန်းချုပ်မမှန်နဲ့ဆက်စပ်လက်တွေ့ features တွေ။ အာရုံကြော 67, 1258-1261 10.1212 / 01.wnl.0000238401.76928.45 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Potenza MN, Steinberg, MA, Skudlarski P. , Fulbright RK, Lacadie CM, Wilber MK ။ (2003) ။ လောင်းကစားရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်တိုကျတှနျးထား: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 60, 828-836 10.1001 / archpsyc.60.8.828 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Preuschoff K. , Quartz SR, Bossaerts P. (2008) ။ လူ့ insula activation အန္တရာယ်ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများအဖြစ်အန္တရာယ်ထင်ဟပ်။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 2745-2752 10.1523 / jneurosci.4286-07.2008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pritchard TC, Macaluso DA, Eslinger PJ (1999) ။ နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာအတွက်အမြင်မြည်းစမ်း။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 113, 663-671 10.1037 // 0735-7044.113.4.663 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Quickfall ဂျေ, Suchowersky O. (2007) ။ နာမငြိမ်ခြေထောက် syndrome ရောဂါအတွက် dopamine agonist အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ ပါကင်ဆက်ဆံရေး။ disorders ။ 13, 535-536 10.1016 / j.parkreldis.2006.10.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rao ကအိပ်ချ်, Mamikonyan အီး, Detre ဂျာ ​​Siderowf အေဒီ, Stern ပာကို MB, Potenza MN, et al ။ (2010) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားထိန်းချုပ်မမှန်နှင့်အတူ ventral striatal လှုပ်ရှားမှုလျော့သွားသည်။ MOV ။ disorders ။ 25, 1660-1669 10.1002 / mds.23147 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ray NJ, Miyasaki JM, Zurowski အမ်, Ko JH, ချိုအက်စ်အက်စ်, Pellecchia G. အ, et al ။ (2012) ။ ဆေးဝါး-သွေးဆောင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူပါကင်ဖွင့်လူနာအတွက် DA homeostasis ၏ Extrastriatal dopaminergic မူမမှန်: တစ် [11C] FLB-457 နှင့်ပေလေ့လာမှု။ Neurobiol ။ dis ။ 48, 519-525 10.1016 / j.nbd.2012.06.021 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Reuter ဂျေ, Raedler တီ, နှင်းဆီအမ်, လက်ဗြဲ, Glascher ဂျေ, Buchel C. (2005) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နတ်။ neuroscience ။ 8, 147-148 10.1038 / nn1378 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Reynolds ကဖြစ်မှု, Hyland BI, Wickens JR (2001) ။ ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှု၏တစ်ဦးကဆယ်လူလာယန္တရား။ သဘာဝတရား 413, 67-70 10.1038 / 35092560 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
RIBA ဂျေ, Kramer um, Heldmann အမ်, ရစ်ချတာအက်စ်, Münte TF (2008) ။ Dopamine agonist အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေတိုးပွါးပေမယ့်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု blunts ။ PLoS တစ်ခုမှာ 3: e2479 10.1371 / journal.pone.0002479 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရော်ဂျာက RD, Lancaster အမ်, Wakeley ဂျေ, Bhagwagar Z. (2004) ။ လူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏အစိတ်အပိုင်းများအပေါ် beta ကို-adrenoceptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology (Berl) 172, 157-164 10.1007 / s00213-003-1641-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rolls ET, Mccabe C. , Redoute ဂျေ (2008) ။ မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးဆုလာဘ်ရလဒ်ကိုနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုံးဖြတ်ချက် task ထဲမှာယာယီခြားနားချက်အမှားကိုယ်စားပြုသည်။ Cereb ။ cortex 18, 652-663 10.1093 / cercor / bhm097 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရွိုင်းအေ, Adinoff ခ, Roehrich L. , Lamparski ဃ, Custer R. , Lorenz V. , et al ။ (1988) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ တစ်ဦးက psychobiological လေ့လာမှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 45, 369-373 10.1001 / archpsyc.1988.01800280085011 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rutledge RB, ဒင်းအမ်, Caplin အေ, Glimcher PW (2010) ။ တစ်ဦး axiomatic မော်ဒယ်နှင့်အတူဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအယူအဆစမ်းသပ်။ ဂျေ neuroscience ။ 30, 13525-13536 10.1523 / jneurosci.1747-10.2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sanfey AG က, Rilling JK, Aronson ဂျာ Nystrom LE, Cohen ကို JD (2003) ။ ယင်းကိုနောက်ဆုံးရာဇသံပေးဂိမ်းထဲမှာစီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏အာရုံကြောအခြေခံ။ သိပ္ပံ 300, 1755-1758 10.1126 / science.1082976 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schultz ဒဗလျူဒါယန်းပီ, မွန်တဂူ PR စနစ် (1997) ။ ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ 275, 1593-1599 10.1126 / science.275.5306.1593 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schultz ဒဗလျူ, Tremblay အယ်လ်e။ , Hollerman JR (1998) ။ မျောက် Basal ganglia နှင့်တိုကျရိုကျ cortex အတွက်ခန့်မှန်းဆုချ။ Neuropharmacology 37, 421-429 10.1016 / s0028-3908 (98) 00071-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schultz ဒဗလျူ (2002) ။ dopamine နဲ့ဆုလာဘ်နှင့်အတူတရားဝင်ရယူခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ 36, 241-263 10.1016 / s0896-6273 (02) 00967-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Seedat S. , Kesler S. , Niehaus DJ, Stein DJ (2000) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအပြုအမူ: ပါကင်ဆန်ရောဂါကုသမှုမှ dopaminergic agent များနှင့်ဒုတိယမြောက်ပေါ်ထွက်လာခြင်း။ စိတ်ကျရောဂါ။ စိုးရိမ်ပူပန် 11, 185-186 10.1002 / 1520-6394 (2000) 11:4<185 :: အကူအညီ-da8> 3.3.co; 2-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Seeley WW, Menon V. , Schatzberg AF, Keller ဂျေ, ဂလိုဗာ GH, Kenna အိပ်ချ်, et al ။ (2007) ။ salience အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် Dissociable အခ်ါဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်များ။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 2349-2356 10.1523 / jneurosci.5587-06.2007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shaffer HJ, ခန်းမ MN, Vander Bilt ဂျေ (1999) ။ သုတေသနပေါင်းစပ်: အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါ disorders လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူများပျံ့နှံ့ခန့်မှန်း။ နံနက်။ ဂျေပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 89, 1369-1376 10.2105 / ajph.89.9.1369 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shen ဒဗလျူ, Flajolet အမ်, Greengard P. , Surmeier DJ သမား (2008) ။ striatal Synaptic plasticity ၏ Dichotomous dopaminergic ထိန်းချုပ်မှု။ သိပ္ပံ 321, 848-851 10.1126 / science.1160575 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Slutske WS, Eisen အက်စ်, စစ်မှန်သော WR, လီယွန် MJ, Goldberg ကဂျေ, Tsuang အမ် (2000) ။ အမျိုးသားများတွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အရက်မှီခိုဘို့ဘုံမျိုးရိုးဗီဇအားနည်းချက်။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 57, 666-673 10.1001 / archpsyc.57.7.666 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Smeding အိပ်ချ်, Goudriaan အေ, Foncke အီး, Schuurman P. , Speelman ဂျေ, Schmand ခ (2007) ။ ပါကင်ရောဂါအတွက်နှစ်နိုင်ငံ STN ဆွပြီးနောက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ ဂျေ Neurol ။ Neurosurg ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 78, 517-519 10.1136 / jnnp.2006.102061 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
စိန့်Önge JR, Floresco SB (2009) ။ အန္တရာယ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ Dopaminergic မော်ဂျူ။ Neuropsychopharmacology 34, 681-697 10.1038 / npp.2008.121 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Steeves TD, Miyasaki ဂျေ, Zurowski အမ်, Lang AE, Pellecchia G. အ, ဗန် Eimeren တီ, et al ။ (2009) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူ Parkinsonian လူနာတိုးပွားလာ striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်: တစ် [11C] raclopride ပေလေ့လာမှု။ ဦးနှောက် 132, 1376-1385 10.1093 / ဦးနှောက် / awp054 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Surmeier DJ သမား, Shen ဒဗလျူ, နေ့အမ်, Gertler တီချမ်းအက်စ်, Tian X တို့မှာ။ (2010) ။ striatal ဆားကစ်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုပြောင်းလဲပစ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 183, 149-167 10.1016 / s0079-6123 (10) 83008-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sutton RS, Barto AG က (1998) ။ အားဖြည့်သင်ယူ: တစ်ခုကနိဒါန်း။ ကင်းဘရစ်, MA: အဆိုပါ MIT ကသတင်းထုတ်
Takahashi အိပ်ချ်, Fuji အက်စ်, Camerer C. , Arakawa R. , Takano အိပ်ချ်, Kodaka အက်ဖ်, et al ။ (2013) ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ Norepinephrine ဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှုခြင်းကိုမနှစ်သက်သူနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 18, 3-4 10.1038 / mp.2012.7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Thut G. အ, Schultz ဒဗလျူ, Roelcke U. , Nienhusmeier အမ်, Missimer ဂျေ, Maguire RP, et al ။ (1997) ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်အားဖြင့်လူ့ဦးနှောက်၏ activation ။ Neuroreport 8, 1225-1228 10.1097 / 00001756-199703240-00033 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tippmann-Peikert အမ်, ပန်းခြံ JG, Boeve BF, Shepard JW, Silber MH (2007) ။ dopaminergic agonists နဲ့ကုသနာမငြိမ်ခြေထောက် syndrome ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ အာရုံကြော 68, 301-303 10.1212 / 01.wnl.0000252368.25106.b6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
တွမ်သည် SM, Fox က CR, Trepel C. , Poldrack RA (2007) ။ စွန့်စားမှုအောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ဆုံးရှုံးမှုခြင်းကိုမနှစ်သက်များ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ သိပ္ပံ 315, 515-518 10.1126 / science.1134239 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tricomi EM, Delgado MR, Fiez ဂျေအေ (2004) ။ အရေးယူအရေးပေါ်ခြင်းဖြင့် caudate လှုပ်ရှားမှု Modulation ။ အာရုံခံဆဲလျ 41, 281-292 10.1016 / s0896-6273 (03) 00848-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန် der Meer အမ်, Kurth-နယ်လ်ဆင် Z. , Redish အေဒီ (2012) ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းစနစ်များအတွက်ပြန်ကြားရေးအပြောင်းအလဲနဲ့။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် 18, 342-359 10.1177 / 1073858411435128 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန် Eimeren တီ, Ballanger ခ, Pellecchia G. အ, Miyasaki JM, Lang AE, Strafella AP (2009) ။ Dopamine agonists အဆိုပါ orbitofrontal cortex ၏တန်ဖိုးကို sensitivity ကိုလျော့: ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်ခလုတ် [ရှာပုံတော်] ။ Neuropsychopharmacology 34, 2758-2766 10.1038 / sj.npp.npp2009124 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vazey EM, Aston-Jones ဟာဂျီ (2012) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏သိမြင်မှုအလုပ်မဖြစ်အတွက် norepinephrine ၏ထွန်းသစ်စအခန်းကဏ္ဍ။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 6: 48 10.3389 / fnbeh.2012.00048 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Verdejo-Garcia ကအေ, လောရင့် AJ, Clark ကအယ်လ် (2008) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်အားနည်းချက်အမှတ်အသားအဖြစ် Impulse: High-အန္တရာယ်သုတေသနကနေတွေ့ရှိချက်၏သုံးသပ်ချက်ကို, ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုများ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 32, 777-810 10.1016 / j.neubiorev.2007.11.003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vickery တီဂျေ, Chun ဟာ MM လီဃ (2011) ။ လူ့ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးအားဖြည့်အချက်ပြမှုများ၏နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရနှင့်သတ်မှတ်ချက်။ အာရုံခံဆဲလျ 72, 166-177 10.1016 / j.neuron.2011.08.011 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vitaro အက်ဖ်, Arseneault L. , Tremblay RE (1999) ။ Impulse အနိမ့် SES ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအတွက်ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ စွဲ 94, 565-575 10.1046 / j.1360-0443.1999.94456511.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Voon V. , Gao ဂျေ, Brezing C. , et al Symmonds အမ်, Ekanayake V. , ဖာနန်ဒက်ဇအိပ်ချ်။ (2011) ။ Dopamine agonists နှင့်အန္တရာယ်: ပါကင်ဆန်အတွက်အရင်းခံတွန်းအားကိုထိန်းချုပ်မမှန်; ရောဂါ။ ဦးနှောက် 134 (Pt ။ 5), 1438-1446 10.1093 / ဦးနှောက် / awr080 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Voon V. , Pessiglione အမ်, Brezing C. , Gallea C. , ဖာနန်ဒက်ဇနာရီ, Dolan RJ, et al ။ (2010) ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူအတွက် dopamine-mediated ဆုလာဘ်ဘက်လိုက်မှုအခြေခံ mechanisms ။ အာရုံခံဆဲလျ 65, 135-142 10.1016 / j.neuron.2009.12.027 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Voon V. , Potenza MN, Thomsen တီ (2007a) ။ ဆေးဝါး-related ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေ။ Curr ။ Opin ။ Neurol ။ 20, 484-492 10.1097 / WCO.0b013e32826fbc8f [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Voon V. , Rizos အေ, Chakravartty R. , Mulholland N. , ရော်ဘင်ဆင်အက်စ်, Howell NA, et al ။ (2014) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်: striatal dopamine Transporter အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့လေ၏။ ဂျေ Neurol ။ Neurosurg ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 85, 148-152 10.1136 / jnnp-2013-305395 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Voon V. , Thomsen တီ, Miyasaki JM, et al က de Souza အမ်, Shafro အေ, Fox က SH ။ (2007b) ။ ပါကင်ရောဂါအတွက် dopaminergic မူးယစ်ဆေး-related ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များ။ Arch ။ Neurol ။ 64, 212-216 10.1001 / archneur.64.2.212 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အာမခံ TD, Rilling JK, Smith က EE, Sokolik အေ, Casey KL, Davidson RJ, et al ။ (2004) ။ နာကျင်မှုများမျှော်လင့်နှင့်အတွေ့အကြုံအတွက် FMRI အတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို။ သိပ္ပံ 303, 1162-1167 10.1126 / science.1093065 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Weintraub ဃ, Koester ဂျေ, et al Potenza MN, Siderowf အေဒီ, Stacy အမ်, Voon V. ။ (2010) ။ ပါကင်ရောဂါအတွက် Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်: 3090 လူနာ cross-section လေ့လာမှု။ Arch ။ Neurol ။ 67, 589-595 10.1001 / archneurol.2010.65 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Weintraub ဃ, Siderowf အေဒီ, et al Potenza MN, Goveas ဂျေ, Morales KH, Duda je ။ (2006) ။ ပါကင်ရောဂါအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားထိန်းချုပ်မမှန်နှင့်အတူ dopamine agonist အသုံးပြုမှုအသင်းမှ။ Arch ။ Neurol ။ 63, 969-973 10.1001 / archneur.63.7.969 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Weller ဂျာ Levin အိုင်ပီ, Shiv ခ, Bechara အေ (2009) ။ အန္တရာယ်များအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအပေါ် insula ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၏သက်ရောက်မှုများ။ Soc ။ neuroscience ။ 4, 347-358 10.1080 / 17470910902934400 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wexler, et al Gottschalk CH, Fulbright RK, Prohovnik ဗြဲ, Lacadie CM, Rounsaville BJ, BE ။ (2001) ။ ကိုကင်းတဏှာ၏ functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 158, 86-95 10.1176 / appi.ajp.158.1.86 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Rompre PP (1989) ။ ဦးနှောက် dopamine နဲ့ဆုလာဘ်။ Annu ။ ဗျာ Psychol ။ 40, 191-225 10.1146 / annurev.psych.40.1.191 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (1996) ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်။ Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ 19, 319-340 10.1146 / annurev.neuro.19.1.319 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (2013) ။ အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးရှာထဲမှာ dopamine ၏ dual အခန်းကဏ္ဍ: drive ကို-ဆုလာဘ်ဝိရောဓိ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 73, 819-826 10.1016 / j.biopsych.2012.09.001 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wray ဗြဲ, Dickerson MG (1981) ။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဆုတ်ခွာ '' ရောဂါလက္ခဏာ၏ချုပ်ရာ။ br ။ ဂျေစွဲ။ 76, 401-405 10.1111 / j.1360-0443.1981.tb03238.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Yacubian ဂျေ, Glascher ဂျေ, Schroeder K. , Sommer တီ, Braus DF, Buchel C. (2006) ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာခန့်မှန်း၏ gain- နှင့်အရှုံး-related တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းချက်များနှင့်အမှားများကိုများအတွက် Dissociable စနစ်များကို။ ဂျေ neuroscience ။ 26, 9530-9537 10.1523 / JNEUROSCI.2915-06.2006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Yarkoni တီ, Poldrack RA, Nichols TE, ဗန်အက်ဆင်း, DC, အာမခံ TD (2011) ။ လူ့အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging အချက်အလက်များ၏အကြီးစားအလိုအလျောက်ပေါင်းစပ်။ နတ်။ နည်းလမ်းများ 8, 665-670 10.1038 / nmeth.1635 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သငျတို့သ Z. , Hammer အေ, Camara အီး, Münte TF (2010) ။ Pramipexole ဆုလာဘ်မျှော်လင့်များ၏အာရုံကြောကွန်ယက်ကို modulates ။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ 32, 800-811 10.1002 / hbm.21067 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zald DH, Boileau ဗြဲ, et al el-Dearedy ဒဗလျူ, ဂွန် R. , McGlone အက်ဖ်, Dichter GS ။ (2004) ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းလူ့ striatum အတွက် Dopamine ဂီယာ။ ဂျေ neuroscience ။ 24, 4105-4112 10.1523 / jneurosci.4643-03.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zuckerman အမ်, Neeb အမ် (1979) ။ Sensation ရှာခြင်းနှင့် psychopathology ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1, 255-264 10.1016 / 0165-1781 (79) 90007-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]